မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ကြီး ( A.B.M.A ): March 2009
March 242009 News ...
မြိတ်ကျွန်းစုလေးတွေကို Vote ပေးကြမလား မောင်ရဲေ...
မြေတစ်ကွက်အတွက် သင့်တော်တဲ့ ပျိုးပင်
souls of 88 ...
Burmese Monks Depict Plight, Protest by Madina Tou...
The Second Fault Line ...
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျာကာတာမြို့လယ်မှာရှိတဲ့ ဈေး...
March 242009 News
Posted by Sanghaalliance at 10:09 PM0comments
Posted by Sanghaalliance at 9:47 AM0comments
မြိတ်ကျွန်းစုလေးတွေကို Vote ပေးကြမလား မောင်ရဲခေါင် (စီလီကွန် လွင်ပြင်)
San Francisco Bay Area ရှိ လူငယ် ဗုဒ္ဓဘာသာ သင်တန်း တစ်ခုတွင်
ဖြစ်ပါသည်။ လူငယ်သင်တန်း ဆိုပေမယ့် အမေရိကန်ပြည်တွင် ကြီး၍
အင်္ဂလိပ် စကားသာ အဓိကပြောသော အသက် (၁၀) နှစ်မှ (၁၇) နှစ်ခန့် အထိ အရွယ်စုံ ပါဝင်သော မျိုးဆက်သစ် မြန်မာ လူငယ်လေးများ အတွက် ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု ရေးရာများကို အဓိက မိတ်ဆက် သင်ကြားပေးသည့်
လစဉ်သင်တန်း တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ထို တစ်လက မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု မိတ်ဆက်ကဏ္ဍ အတွက် ကျွန်တော့် တာဝန်ကျရာ ယဉ်ကျေးမှုများအား အမိ မြန်မာပြည် အကြောင်းကို အရင် မိတ်ဆက်ပြောပြရန် ပြင်ဆင်ထားမိသည်။
သင်တန်းမစမီတွင် သင်တန်းသူ၊ သင်တန်းသားလေးများအား “Burma (သို့) Myanmar ဟုခေါ်သည့် အမိမြေ အကြောင်း မည်မျှ သိသနည်း၊ ဘာတွေသိထား သနည်း” ဟု အရင် မေးကြည့်ရာ ကျွန်တော်
ဘာဆက်ပြောရမှန်း မသိ ဖြစ်သွား၏။ သူတို့၏ ဖြေပုံလေးတွေကို ကြည့်၊ ကြည့်ပါ။ ‘Very Hot’ တဲ့၊ ‘Dirty’ တဲ့၊ ‘Bad Government’ တဲ့၊ ‘Mosquito’ တဲ့၊ ‘Poor People’ တဲ့၊ ကုန်ရော။ “မင်းတို့ ပြောတာတွေလည်း ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါတွေက နောင် အခြေအနေ အရ ကြိုးစားပြီး ပြုပြင်ယူလို့ရပါတယ်။ နောက် ကောင်းတာတွေလည်း ပြောပြပါဦး” ဟု တိုက်တွန်းတော့မှ ‘A Lot of Pagodas’ ၊‘Friendly People’ ၊ ‘Good Food’ တဲ့။ ကျွန်တော်လည်း အဲဒီတော့မှ “တခြား ကောင်းတာတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်” ဟု ဆိုပြီး မြန်မာပြည်၌ သယံဇာတ နှင့် သဘာဝ အရင်းအမြစ်များ ကြွယ်ဝပုံ၊ ဇီဝ
မျိုးကွဲများ စုံလင်ပုံ၊ ကိုယ်ပိုင် ယဉ်ကျေးမှု နှင့် တိုင်းရင်းသား ပေါင်းစုံ ယှဉ်တွဲ နေထိုင်ကြပြီး ကမ္ဘာ့ အဆင့်မီ Civilization များ ထွန်းကားခဲ့ပုံ၊ ဦးသန့် အစရှိသည့် ကမ္ဘာသိ ထူးချွန်ကျော်ကြားသော မြန်မာများ နှင့် ထူးခြား လှပသော နေရာဒေသများ အကြောင်း စသည်ဖြင့် သူတို့ သိနိုင်အောင်
ဟုတ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ အမိတိုင်းပြည်တွင် ကမ္ဘာ့ အံ့ဖွယ် ထူးခြားသော ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် နှင့် သဘာဝ နေရာဒေသ များစွာ ရှိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင် မသိကြ၍ နှင့် သူများသိအောင် ပြန်မပြောတတ်၍သာ တိမ်မြုပ် သလို ဖြစ်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ချို့တော့
ကြားမိလိုက်ကြမည် ထင်ပါသည်။ 2007 July တုန်းက New7Wonders အဖွဲ့ကြီးမှ ကြီးမှူး၍ ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ် (၇) သွယ်စာရင်းသစ်ကို ကမ္ဘာ့ လူသား သန်းပေါင်း ရာကျော်၏ Internet ဆန္ဒမဲများဖြင့် ရွေးချယ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြရာတွင် မြန်မာပြည်မှ ပုဂံ နှင့် ရွှေတိဂုံ စေတီတော် တို့မှာ Nominate လုပ်မည့်လူပင် မရှိ၍ ဆန်ခါတင် စာရင်း မပြော နှင့် Nominee စာရင်းတွင်ပင် မပါခဲ့ရပါ။
ကျွန်တော်လည်း Yahoo News ထဲတွင် ကမ္ဘာ့ အံ့ဖွယ် နောက်ဆုံး ဆန်ခါတင် (၂၁) နေရာစာရင်း ကိုရွေးချယ်ပြီးကြောင်း သတင်းပါလာတော့မှသာ နောက်ကျစွာ သိခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ တကယ်တော့ မြန်မာတို့၏ အံ့ဖွယ် ဖြစ်သော ပုဂံမြေသည် World’s Man-made Travel Wonders များ စာရင်းတွင် နံပါတ် (၆) နေရာ၌ ရှိနေရာ၊ အခွင့်အရေးသာ ရခဲ့ပါက ကမ္ဘာ့ အံ့ဖွယ် (၇) သွယ် စာရင်း၌ ထိုက်ထိုက်တန်တန် တစ်နေရာ ရခဲ့လိမ့်မည် ဟု ကျွန်တော် ယုံကြည်မိပါသည်။ မြန်မာတို့၏ ဦးစွန်း ရွှေတိဂုံ စေတီတော်ကြီးသည်လည်း Seven Forgotten Wonders စာရင်းတွင် ပါဝင်နေကြောင်း Internet Search လုပ်ကြည့်လျှင် ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ တွေ့ရပါလိမ့်မည်။ ဒါတွေထားပါတော့၊ အသိ နောက်ကျသည့် ကျွန်တော်တို့ ဘာသာပင် အပြစ်တင်ရပါမည်။ ဒါ့အပြင် ယခုAခါတွင် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာများ အတွက် နောက်ထပ် အခွင့်အရေး တစ်ခု ရလာပါပြီ။
ဒါကတော့ New7Wonders အဖွဲ့ သည် နောက်ထပ် ကမ္ဘာ့ အံ့ဖွယ် (၇) သွယ်စာရင်းကို ထပ်မံ ရွေးချယ် သတ်မှတ်ဖို့ Internet မှ ဆန္ဒမဲများ တောင်းခံနေရာ မြန်မာပြည်မှ သဘာဝ ရတနာဖြစ်သော “မြိတ်ကျွန်းစု - Mergui Archipelago” သည် Final Nominees (၂၆၁) နေရာ စာရင်းတွင်
ပါဝင်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ လူသားများသည် ထို (၂၆၁) ခု စာရင်းဝင် နေရာများကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၇) ရက်နေ့ အထိ မဲပေးခွင့် ရမည်ဖြစ်ပြီး မဲ အများဆုံးရသော ထိပ်ဆုံး (၇၇) နေရာ သည်သာ နောက်ဆုံး အံ့ဖွယ် (၇) သွယ်နေရာ အတွက် ထပ်မံ ရွေးချယ်ခံခွင့် ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာပြည်၌ စိတ်ဝင်စားဖွယ် သဘာဝနေရာ များစွာရှိသည့် အနက်
မြိတ်ကျွန်းစု ကိုမှ သူတို့ ဘာကြောင့် ရွေးချယ်ထား သနည်း ဟု Internet
များထဲတွင် လေ့လာကြည့်မိသည်။ အဲဒီတော့မှ လား…၊ လား…၊ အဲဒီတော့မှ
ကျွန်တော် မသိခဲ့ဖူးသော မြိတ်ကျွန်းစု၏ အလှနှင့် ထူးခြားချက်များကို အခြား
လူမျိုးတို့ ရေးထားတော့မှ သွားသိရသည်။ မြိတ်ကျွန်းစုသည် လူသားတို့ မနှောင့်ယှက်သေးဘဲ သဘာဝအရင်း မူလအတိုင်း ကျန်နေသည့် ကမ္ဘာ့ နောက်ဆုံး ကျွန်းစု (World’s Last Archipelago) တဲ့၊ မြိတ်ကျွန်းစု၌ အခြားနေရာတွေမှာ မတွေ့နိုင်တဲ့ ရေသတ္တဝါ မျိုးစိတ်တွေကို စုံလင်အောင် တွေ့ နိုင်တယ်တဲ့၊ ယခင်က ယိုးဒယား နိုင်ငံမှ Similar ကျွန်းများကို ကမ္ဘာ့ ရေငုပ်ရန် အကောင်းဆုံး အဖြစ် သတ်မှတ်ထားရာမှ ယခုအခါ မြိတ်ကျွန်းစုသည် ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး Diving Site ဖြစ်သွားပြီတဲ့၊ မြိတ်ကျွန်းစု ငါးမန်း မျိုးစုံ တို့သည် ယဉ်ကျေးပျူငှာစွာဖြင့် လူကို
မကိုက်တတ်သောကြောင့် ကမ္ဘာ့ ရေငုပ်သမား တို့၏ အမြင့်ဆုံး အိပ်မက်ဖြစ်သော ငါးမန်းများ နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ ဆုံ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ယူခြင်း (Shark Encounter) ကို မြိတ်ကျွန်းစုမှာ ပြုလုပ်နိုင်ပြီတဲ့၊ ယခုအခါ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများသည် ထိုင်းနိုင်ငံမှ တဆင့် မြိတ်ကျွန်းစုသို့
ဝင်ရောက်နိုင်ရန် အတွက် မျက်စောင်း တခဲခဲ နှင့် စိုင်းပြင်းနေကြရာ Sea Gypsies ခေါ် ဆလုံ -3-
တိုင်းရင်းသား တို့၏ သဘာဝနေအိမ် ဖြစ်သော မြိတ်ကျွန်းစု၏ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်များကို မူရင်းအတိုင်း ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် အရေးကြီးပြီ စသည်ဖြင့် သိရပါသည်။ အံ့ဖွယ် မြိတ်ကျွန်းစု အတွက်၊ အမိမြေ၏ သဘာဝ အလှအပများ အတွက် ကျွန်တော် ဂုဏ်ယူမိပါသည်။ အကယ်၍
မြိတ်ကျွန်းစုသာ ထိပ်ဆုံး ဆန်ခါတင် (၇၇) နေရာ စာရင်းတွင်သာ အရွေးချယ်ခံရပါက မည်မျှ အားရဖွယ် ကောင်းလိမ့်မည်နည်း ဟုလည်း တွေးတော အိပ်မက် မက်မိပါသည်။ သိပ်တော့ မလွယ်လှပါ။ New7Wonders of Nature ရွေးချယ်ပွဲအား လေ့လာကြည့်မိရာ မိမိတို့
နိုင်ငံမှ နေရာများကို အဓိက Vote ကြသည့် ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံစုံ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် ပြိုင်ပွဲသဖွယ်ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ ရပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေရော မျိုးချစ်စိတ် မည်မျှ ရှိကြမည် မသိပါ။ လူဦးရေ များပြားလှသည့် အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် စသည့် နိုင်ငံများတွင်ပင် သူတို့၏ နိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု
သဘာဝ အံ့ဖွယ်များကို မဲပေးကြရန် အတွက် အမျိုးသားရေး လှုပ်ရှားမှု တစ်ရပ် အဖြစ် နိုင်ငံပိုင် Media များမှပင် လှုံ့ဆော်နေကြပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့၏ နိုင်ငံပိုင် Media များကတော့ တခြားအရေးကြီးသည့် ကိစ္စများနှင့် အလုပ်ရှုပ်နေကြတုန်း ရှိပါဦးမည်။ မကြာသေးမီက တောင်အမေရိကမှ အလည်ပြန်လာခဲ့သော မြန်မာ မိတ်ဆွေ တစ်ဦးကလည်း ပြောပါသည်။ ဘရာဇီး နှင့် အာဂျင်တီးနားမှ လူများသည်လည်း သူတို့၏ နာမည်ကျော် Iguazu ရေတံခွန်ကြီးအား ကမ္ဘာ့ အံ့ဖွယ် အဖြစ် မဲပေးကြရန် ခရီးသွား eည့်သည်များကို တိုက်တွန်းသည့် Campaign များလုပ်နေကြပြီတဲ့။
ဒီလိုဆို ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံကရော။ ချစ်လှစွာသော အမိမြေ၏ လူဦးရေ (၉၀) ရာခိုင်နှုန်းကျော်မှာEmail နှင့် Internet သုံးရန် မဆိုထားဘိ၊ Computer ပင် ကောင်းကောင်း မကိုင်ဖူးကြရာ မြိတ်ကျွန်းစု အတွက် လိုအပ်သော မဲများရရန် အားလျော့မိပါသည်။ သို့သော် မြန်မာပြည် ပြင်ပ၌ ရောက်နေကြသော မြန်မာ လူမျိုးများ သန်းပေါင်းများစွာ ရှိပါသည်။ အမေရိကား၊ ကနေဒါ၊ သြစတြေးလျ၊ အင်္ဂလန်၊ စင်္ကာပူ၊ ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ ဂျပန်၊ အိန္ဒိယ၊ ဂျမေကာ၊ အာရပ် နှင့် အာဖရိက စသည့် နိုင်ငံများ အားလုံးတို့မှ မြန်မာများ တက်ညီလက်ညီဖြင့် ဝိုင်းဝန်း မဲပေးကြမည် ဆိုလျှင် ကျွန်တော်တို့၏ အမျိုးသား ရတနာ မြိတ်ကျွန်းစု အတွက် အခွင့်အရေး တစ်ခု ရှိနိုင်ပါသေးသည်။ မိမိတို့၏ အချိန် ၁ မိနစ်ဆို၊ ၁ မိနစ် ကလေးခန့်သာ ကြာပါသည်။ www.new7wonders.com သို့ သွား၍ Asia ၊ Mergui Archipelago (Myanmar) ကို ရွေးလိုက် ရုံသာ ဖြစ်ပါသည်။ ယခုAခါလို မြန်မာလူမျိုးတို့၏ နိုင်ငံ နှင့် အခြေအနေ Aဘက်ဘက်မှ နိမ့်ကျနေချိန်တွင် မိမိတို့၏ အမျိုးသား ဂုဏ်ကို မည်သည့်နည်းနှင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် မြှင့်တင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး အားထုတ်သင့်ပါသည်။ မျက်မှောက်ကာလတွင် မြိတ်ကျွန်းစုAား ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေးထက် သူဌေးကျွန်း စသည့် နေရာများတွင် ကြယ်ငါးပွင့် ကာဆီနို ရုံကြီးများ ဖွင့်၍ နိုင်ငံခြားငွေ ရရှိရေးကိုသာ အလေးပေးနေရာ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး အတွက် ကမ္ဘာ၏ Aာရုံစိုက် ပံ့ပိုးမှုကိုသာ စောစောစီးစီး မရခဲ့လျှင် မြိတ်ကျွန်းစု၏ Aနာဂတ် Aတွက် ရင်လေးစရာသာ ဖြစ်တော့သည်။
ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ဘယ်မှာပဲ ရောက်နေနေ မြန်မာတို့ စုစည်း အင်အားပြကြဖို့ အချိန်ကျပါပြီ။ Email Account (၁) ခု ရှိလျှင် (၁) မဲ ပေး၍ ရပါမည်။ ပြည်ပရောက် မြန်မာတိုင်း၌ မရှိဘူးဆိုလျှင်တောင် Email (၂) ခု၊ (၃) ခု ရှိကြပါသည်။ မြန်မာပြည်၌ Internet မသုံးနိုင်သူပေါင်း သန်း (၅၀) ကျော်
ရှိပါသည်။ သူတို့ အားလုံး၏ ကိုယ်စား မိမိတို့၌ ရှိသမျှ Email များဖြင့် Vote ပေးကြပါ။ လူလည်ကျသည် မဟုတ်ပါ။ တခြား လူမျိုးများလည်း ဒီအတိုင်း လုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ မြိတ်ကျွန်းစုသည် ယခုအခါ (၂၆၁) နေရာ ရှိသည့် အနက် အဆင့် (၁၉၆)၊ ကျွန်းစု အမျိုးအစား အနေနှင့် ဆိုလျှင် အဆင့် (၂၈) ၌သာ ရှိနေပါသည်။ အားလုံး ဝိုင်း Vote ကြလျှင် အဆင့် (၇၇) အတွင်းသို့ အလွယ်တကူ ဝင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ အချိန် (၃) လခန့်သာ ရှိပါတော့သည်။ အချိန်မဆိုင်းဘဲ ချက်ချင်းသွား၍ Vote ကြစေလိုပါသည်။ ကိုယ်တိုင်လည်း Vote ပါ။ မိသားစု နှင့်သူငယ်ချင်းများကိုလည်း တိုက်တွန်းပါ။ ရှိသမျှ နိုင်ငံစုံမှ မိတ်ဆွေများအားလည်း Email Forwardလုပ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်၏ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများ အတွက်၊ အမိမြေ၏ သဘာဝအံ့ဖွယ် အလှအပ အတွက်၊ ညှိုးနွမ်းနေခဲ့ရသော ကျွန်တော်တို့၏ အမျိုးသား ဂုဏ်သိက္ခာများ အတွက်၊
တောက်ပဆဲ မြန်မာတို့၏ အနာဂတ် အိပ်မက်များ အတွက် သဘာဝ အတိုင်း လှနေသည့် မြန်မာ့ မြိတ်ကျွန်းစု - Mergui Archipelago - ကို ပိုမို ထွန်းပအောင် Vote ပေးကြပါလို့သာ မေတ္တာရပ်ခံ တိုက်တွန်း ရေးသား လိုက်ရပါသည်။ အခုပဲ မြိတ်ကျွန်းစုလေးတွေကို Vote ပေးကြမလား ခင်ဗျာ။ ။
Posted by Sanghaalliance at 9:39 AM0comments
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ ဘားရက် အိုဘားမားက အိမ်ဖြူတော်တွင် အာဏာရလာချိန်မှစ၍ သတင်းများအရ ကမ္ဘာ့အင်အားကြီး နိုင်ငံနှင့် ပျက်ယွင်းနေရသည့် ဆက်ဆံရေး ကိစ္စကို ပြန်လည် ပြင်ဆင်နိုင်ရန်
မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်များက ကြိုးပမ်းနေခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုပါသည်။ အလားတူပင် ၀ါရှင်တန်ရှိ အစိုးရကလည်း မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့ ချမှတ် ကျင့်သုံးနေသည့် မူဝါဒများကို ပြန်လည်သုံးသပ်နေသည်ဟု ဆိုလာခဲ့သည်။
Posted by Sanghaalliance at 9:37 AM0comments
မာနယ်ပလောမှ ရရှိလာသည့် သင်ခန်းစာဖြင့် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်နှင့် လာမည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ အခြေအနေတို့ကို နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ် မိသည်။ မာနယ်ပလော၏ နေ့များကို မှတ်မှတ်ရရ ကျနော်သတိရနေသေးသည်။ မာနယ်ပလောဆိုသည်က ကရင်ပြောက်ကျား ၃,၀၀၀ ခန့် နေထိုင်သည့် တောရွာကြီးဖြစ်သော်လည်း၊ သေနင်္ဂဗျူဟာအရ အချက်အခြာကျသည့် နေရာတွင်ရှိနေသည်။ သံလွင်မြစ်နှင့် သောင်ရင်းမြစ်အကြား သွယ်တန်းတည်ရှိနေသည့် မြေပြင်ဖြစ်ပြီး၊ သဘာဝတောင်တန်းများ ကာရံထား သောကြောင့်လည်း အရောက်အပေါက် ခက်ခဲသည့်နေရာ ဖြစ်သည်။
မာနယ်ပလောက တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေရာမှ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဒီမိုကရေစီ အုံကြွတောင်းဆိုမှုကို အကြမ်းဖက်ချေမှုန်းခံရ အပြီး၊ ကျောင်းသားများနှင့် ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများက လာရောက်ပူးပေါင်းကြသောအခါ သက်ဝင်လှုပ်ရှားလာခဲ့သည်။ ဒီမိုကရေစီရေး တိုက်ပွဲဆက်ရန် မြို့ပြမှ ကျောင်းသားများကလည်း တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်သူပုန်အင်အားစုများနှင့် ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။
ယခင်က တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် လှုပ်ရှားမှုများ ရှိနေခဲ့သော်လည်း ပင်မမြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် အလေးထားဖော်ပြ မခံခဲ့ရပါ။ သို့သော်လည်း ၁၉၈၈ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ၏ အရေးက အစွန်အဖျားနေရာမှ ဗဟို ချက်မနေရာသို့ ရောက်လာခဲ့သည်။ အလေးပေး အာရုံစိုက်ခံလာခဲ့ကြရသည်။ မာနယ်ပလောသည်လည်း တချိန်က ကရင် ပြောက်ကျားများဖြစ်သည့် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) ၏ ဌာနချုပ်အဖြစ်မှသာမက ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ၏ ဌာနချုပ်အဖြစ်ပါ အရေးပါသည့် အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်ခဲ့လေသည်။ မာနယ်ပလောကို အဖွဲ့အများအပြားက "လွတ်မြောက် နယ်မြေ" အဖြစ် ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲခဲ့ကြသည်။ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ၏ တပ်ပေါင်းစု (DAB) နှင့် နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာ သည့် တပ်ပေါင်းစုများ၏ ဘူမိနက်သန်ဖြစ်ခဲ့သည့်အပြင်၊ ပြည်ပရောက် အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ (NCGUB) သည် လည်း ရှားရှားပါးပါး ဤနယ်မြေကျဉ်းကလေးကပင် ပေါ်ထွက်မွေးဖွားလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုစဉ်က စစ်ရေးအတွေ့အကြုံနည်းလှသေးသော (ABSDF) ကျောင်းသားစစ်သားတဦး အနေနှင့် တာဝန်ယူခဲ့ရသည့် ကျနော့်အနေနှင့် မာနယ်ပလောနှင့် ပတ်သက်သည့် ခံစားမှုက ထူးထူးခြားခြားနိုင်လှသည်။ တဖက်တွင် ပြင်းထန်ကြမ်း တမ်း၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်လှသည့် စစ်ပွဲများကြုံခဲ့ရသလို၊ သတ္တိပြောင်မြောက်သူများနှင့် အံ့ချီးဖွယ် လေးစားထိုက်သူ သူရဲကောင်းများကိုလည်း ကြုံခဲ့ရသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရက မာနယ်ပလောသို့ ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှ စ၍ ထိုးစစ်များ ဆင်လာခဲ့သည်။ ထိုးစစ်များက များသောအားဖြင့် ခြောက်သွေ့ရာသီ (နွေရာသီ) တွင် ထိုးစစ်ဆင်လာတတ်သည် ဖြစ်ရာ၊ တောမီးလောင်သည့် ရနံ့များ၊ ခြောက်သွေ့သည့် နွေအပူရှိန်၊ နားကွဲမတတ် ဆူလောင်နေတတ်သည့် ပုဇဉ်းရင်ကွဲကောင်များ၏ အော်သံကို ကြားလျှင် ရံဖန်ရံခါ ကျနော် မာနယ်ပလောကို ပြန်အမှတ်ရနေတတ်သည်။ ကျနော့်အတိတ်က မာနယ်ပလော အတွေ့အကြုံကို ပြန်လှုပ်ခတ်လာတတ် သည်။ မာနယ်ပလောတွင် အဖြစ်မျိုးစုံ ကြုံခဲ့ရဖူးသည်။ လေကြောင်းမှ တိုက်ခိုက်မှု၊ လက်နက်ကြီးပေါက်ကွဲမှုများ ကြုံခဲ့ရ သလို၊ ရုပ်ပုံ ပျက်ယွင်းနေသည့် အလောင်းများကိုလည်း ရေချိုးပေးရဖူးသည်။ စစ်ရှိန်အမြင့်ဆုံး အချိန်၌ တစ္ဆေမြို့ကြီး သဖွယ် လူသူတိတ်ဆိတ်နေသည့် မာနယ်ပလောကိုလည်း မြင်ခဲ့ရဖူးသည်။ သေနတ်ထောက်ခေါ်လာပြီး ပေါ်တာထမ်းခိုင်း သည့်ကြားမှ သက်စွန့်ဆံဖျားထွက်ပြေးလာပြီး ကျနော်တို့တပ်များနှင့် ပူးပေါင်းလာကြသည့် အထမ်းသမား ပေါ်တာများကို လည်း ကြုံဆုံခဲ့ရဖူးပါသည်။
မိမိထက် လက်နက်၊ လူသူ အင်အားသာသော မြန်မာစစ်တပ်များ၏ ထိုးစစ်ကို အံ့သြဖွယ် ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ခဲ့သည့် ကရင်တပ် များကို ချီးကျူးကြရမည်ပင် ဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က အတွေ့အကြုံနည်းလှသေးသည့် လူငယ်လေးတဦးအနေဖြင့် ကျနော်က မာနယ်ပလောကို မကျရှုံးဘဲ ဆက်လက်ခုခံနိုင်သည်ကို မြင်ချင်နေမိသည်။ ထိုးစစ်မှန်သမျှ လှန်ပစ်လိုက်သည်ကို မြင်ချင် နေမိသည်။ သို့သော်လည်း ဤသည်က ကျနော်၏စိတ်ကူးဆန္ဒသာ ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် စစ်အစိုးရ စစ်တပ်များ နှင့် ခွဲထွက် ဒီကေဘီအေတပ်များလက်တွင်းသို့ မာနယ်ပလောကို လက်လွှတ်ခဲ့ရပါသည်။ အမှန်တော့ ခံစစ်သေဆိုသည်မှာ ယနေ့ကာလတွင် မသုံးတော့သော၊ မေ့လျော့နေကြပြီဖြစ်သော စစ်အတတ်ပညာသာ ဖြစ်ပါသည်။ မည်သည့် စစ် တပ်ကမျှ ခံစစ်ကတုတ် တခုထဲတွင် ပိတ်မိ၍ မနေလိုကြတော့ပြီ။ ခံတပ်များကိုလည်း မဆောက်လိုကြတော့ပြီ ဖြစ်သည်။
ထိုအချိန် တောထဲနေစဉ်က ကျနော် ဆောင်းပါးတပုဒ် ဖတ်ခဲ့ရသည်။ စာရေးဆရာကို တိတိကျကျ မှန်းဆမရတော့သော် လည်း မာတင်စမစ်ဟု ထင်ပါသည်။ သူက ၁၉၉၀ ခုနှစ် ကာလများက မာနယ်ပလောကို မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဟု "ဗဟိုချက်မ" ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က ကျောင်းသားများ ထွက်ပြေးရောက်ရှိလာကြပြီး နောက်ပိုင်း၊ နိုင်ငံတကာနှင့် သတင်းမီဒီ ယာများကလည်း မာနယ်ပလောတွင် အာရုံစိုက်နေခဲ့ကြသည် မဟုတ်ပါလား။ မာနယ်ပလောက တိုင်းရင်းသားအင်အားစု များ၏ (ရေတိုပဲ ဖြစ်ပါစေ) ညီညွတ်မှုပြယုဂ်တခု ဖြစ်နေခဲ့သလို၊ စင်ပြိုင် အစိုးရဖွဲ့စည်းထားသည်မှာလည်း လတ်လတ် ဆတ်ဆတ်၊ ထိုမျှမက စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် တိုက်ပွဲကြီးများ၊ ထိုးစစ်များကြောင့်လည်း မာနယ်ပလောက လူအများကိုဖမ်းစား ထားနိုင်ခဲ့ပါသည်။
၎င်းစာရေးသူကပင် ဆက်ပြောပါသည်။ နောက်ပိုင်း ၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်လာပြီးနောက်ပိုင်း ဤနိုင်ငံရေး "ဗဟိုချက်မ"က အိမ်အမှတ် ၅၄၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ သည်ဟု ဆိုသည်။ ဒေါ်စုအိမ်ရှေ့တွင် ထောက်ခံသူများဖြင့် စည်ကားနေခဲ့သလို၊ အပတ်စဉ် ဆွေးနွေးပွဲများတွင်လည်း ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် NLD ခေါင်းဆောင်များက စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ဟောပြောစည်းရုံးနိုင် ခဲ့ကြသည်။ နောက်တကြိမ် ချေမှုန်း ဖြိုခွဲမခံရမီ အထိ လှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့ကြပါသည်။
ဤဆောင်းပါးကို ဖတ်မိချိန်မှစ၍ ရံဖန်ရံခါဆိုသလို ကျနော် တွက်ဆနေမိဖူးသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရေး၏ "ဗဟိုချက်မ" က ယနေ့ အချိန်တွင် မည်သည့်နေရာတွင် ရှိနေပါသနည်း။ ကျနော့်တွင် အဖြေ အတိအကျ မရှိပါ။ သို့သော်လည်း နိုင်ငံရေး နှင့် အာဏာသဘော၏ အရည်ဆန်မှု၊ ရွှေ့ပြောင်းနေမှုကို သဘောပေါက်လာသည်ဟုတော့ ထင်သည်။
မာနယ်ပလော ခံစစ် အတွေ့အကြုံမှနေ၍ ကျနော် သင်ကြားရရှိလာခဲ့သည့် အရေးကြီးသော သင်ခန်းစာတခု ရှိသည်ဟု တော့ထင်သည်။ ခံစစ်သေများမှာ ဘယ်တော့မှ ရေရှည်မမြဲဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်က ဒေါ်စုအိမ်ရှေ့ လူထုစုဝေးပွဲများ နှင့် ၅-ယောက်ထက်ပို၍ မစုရုံးရ မာရှယ်လောကို အာခံနေသည့် လှုပ်ရှားမှုများကို စစ်ရေးအရ သုံးသပ်မိသည်။ ခြံအမှတ် -၅၄ က ခံစစ်သေသဖွယ် ဖြစ်လာခဲ့ပြီဟု ကျနော်မြင်မိသည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် အလားတူ လှုပ်ရှားမှုများကို ခြံအမှတ်-၅၄ တခု တည်းသာမက အခြား အနယ်နယ် အရပ်ရပ်ရှိ NLD ရုံးခွဲများ အထိပါ ပျံ့နှံ့သွားစေချင်ပါသည်။ ခံစစ်သေဆိုလျှင် မကြာမီပင် ၀ိုင်းပတ်ခံရမည်၊ ချေမှုန်းခံရဖို့ များနေပါသည်။
မာနယ်ပလော ခေတ်ကောင်းစဉ်ကပင် အချို့သော တပ်မှူးများနှင့် နိုင်ငံရေးသမားများက ကေအဲန်ယူခေါင်းဆောင်များထံ တပ်များကို ဖြန့်ချရန် အကြံပေးခဲ့ကြဖူးပါသည်။ ခံတပ်တခုသဖွယ် ခုခံနေကြမည့်အစား၊ ရှေ့ကိုထိုးဖောက်၍ ပြောက်ကျား စစ်ဆင်ရန် အကြံပေးခဲ့ကြဖူးပါသည်။ လက်နက် လူအင်အားမယှဉ်သာသော ပြောက်ကျားစစ်ပွဲ၏ သဘောသဘာဝနှင့် လည်း သို့မှသာ ကိုက်ညီလိမ့်မည်ဟု ဆိုခဲ့ကြသည်။ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများအနေနှင့်လည်း ဤသင်ခန်းစာကို အသုံးမချ သင့်ပါသလော၊ ကျနော် စဉ်းစားခဲ့ဖူးသည်။
ယခုတော့ စစ်အစိုးရက ၂၀၁၀ တွင် ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပမည်ဟု ကြေညာလာခဲ့ရာ "ရပ်တည်ချက်" ပြဿနာပေါ် ပေါက်လာခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် မြေပြိုကမ်းပြို အနိုင်ရခဲ့သော ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို ဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်မည် လော၊ နောက်တပွဲအတွက် ပြင်မည်လောဟု ပြဿနာ ရှိလာသည်။
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်သူများက သူတို့၏ ဒီမိုကရေစီ လိုလားချက်ကို ပြသသည့်အနေနှင့် သူတို့၏ နှလုံး သားမှ မဲတပြားကို တန်ဖိုးထားပေးခဲ့ကြပါသည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ကို အားကိုးအားထား ပေးခဲ့ကြပြီး၊ NLD က သမိုင်းဝင် မဲအပြတ်အသတ် အနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်လာ စေရေးအတွက် NLD ရွေးချယ်ခံ ကိုယ်စားလှယ်များအပါအ၀င် လူအများအပြားက ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အခြေပြု အသုံးချခဲ့ကြပါသည်။ ဂန္ဒီခမ်းမ ကြေညာချက်ထုတ်၍ တောင်းဆိုခဲ့သည်။ မြန်မာပြည်တွင်း စင်ပြိုင်အစိုးရဖွဲ့စည်းရေး လှုပ်ရှားခဲ့ကြသည်။ ပြည်ပတွင် အဝေးရောက် အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ (NCGUB) ကို တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ စစ် အစိုးရ၏ တရားဝင်မှုကို သရော်စိန်ခေါ်လုပ်ရန် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြု ကော်မီတီ (CRPP) ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်။ ထိုမျှမက အခြားနည်းများဖြင့်ပါ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို သုံး၍ ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါသည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ NLD အထူးကြေ ညာချက်အရ "လွှတ်တော်ခေါ်ပေးပါ၊ လွှတ်တော်မှ စစ်အစိုးရကို အသိအမှတ်ပြုပေးမည်။ နိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ် ငန်းများ ဆက်ဆွေးနွေးမည်" ဟု အတုံ့အလှယ်သဘောမျိုးလည်း အဆိုပြုခဲ့ဖူးသည်။ နောက်ဆုံး ကုလသမဂ္ဂတွင် စစ်အစိုး ရ၏ ထိုင်ခုံနေရာ ဖယ်ရှားရေးအတွက် လှုပ်ရှားမှုများကိုပါ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။
သို့သော် မေးခွန်းဖြစ်လာသည်မှာ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်သည် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး၏ "ဗဟိုချက်မ" တွင် ရှိနေပါသေး၏ လော ဆိုသည့် မေးခွန်းဖြစ်သည်။ ကျနော့်အနေဖြင့် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို ဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ထားလိုသည့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ မစွန့်ပယ်လိုကြသူများအပေါ် နားလည်စာနာမှု ပေးနိုင်ပါသည်။ ထိုရလဒ်ကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ရေးအတွက် လူအများက သူတို့၏ အသက်သွေးချွေးများ စွန့်လွှတ်ပေးဆပ် ကာကွယ်ခဲ့ကြရသလို၊ အများအပြားမှာလည်း ထောင်များအတွင်း အနစ်နာခံ ပေးဆပ်နေကြရဆဲ ဖြစ်သည်။
စစ်တပ်က ဆောင်ရွက်ပေးမည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲသည်လည်း မြန်မာနိုင်ငံရေး၏ "ဗဟိုချက်မ" ဖြစ်လာနိုင်ပါ၏လော။ မေးရန် ကျန်ရှိနေပါသေးသည်။ လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မသမာမှုများ၊ မဲညစ်မဲလိမ်မှုများ မျှော်လင့်ထားကြသလို၊ ရွေး ကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေများ၊ ပါတီများ လုပ်ပိုင်စည်းရုံးခွင့်များလည်း လူသိရှင်ကြား ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ထွက်ပေါ် မလာ သေးပါ။ လူအများစုက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲသည် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပစဉ်ကလို၊ သူ့ဖဲသူချိုး သူ့အကွက်သူဆင် သွားလိမ့်မည်ဟုသာ ယူဆနေကြပါသည်။ ထိုမျှမက ဤရွေးကောက်ပွဲရလဒ်သည်ပင် ဒီမိုကရေစီနည်း မကျသော စစ်တပ်က ဓါးမိုးထားသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဆက်လက်စခန်းသွားကြရဖို့ ရှိနေပါသည်။
အများစုက ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို မစွန့်လွှတ်လိုကြပါ။ တချိန် အသုံးပြုနိုင်မည့် လက်နက်ကောင်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ယူဆနေကြဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဆိုလျှင်လည်း မေးခွန်းရှိနေပါသေးသည်။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို မည်သို့ အား ကောင်းသက်ဝင်လာအောင် ဖြည့်ဆီးကြမည်နည်းဟူသော မေးခွန်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
အတိုက်အခံ အင်အားစု အများစုနှင့် အစိုးရနှင့် သဘောထားကွဲသူများက ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားရေး ၌သာ ရပ်တည်တင်းခံနေကြသည်ကို ကျနော်သတိပြုမိပါသည်။ ဤအနေအထားကို ကျနော်က ခံစစ်သေသဖွယ် ထင်မြင် လာမိပါသည်။ ဤခံစစ်သေကို မည်မျှကြာကြာ ကျနော်တို့ ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါမည်နည်း။ မသေချာလှပါ။
တချိန်တည်းမှာပင် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ရွေးလိုက်ကြရအောင်လားဟုလည်း ကျနော် မတိုက်တွန်းလိုသေးပါ။ ဤ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲသည်သာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး၏ ဗဟိုချက်မ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ပြဿနာများ ပြေလည် သွားဖွယ်ရာ လမ်းကြောင်းအဖြစ် မမြင်မိသေးပါ။
မြန်မာ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ အားလုံး၊ တိုင်းရင်းသား အင်အားစုများ အားလုံး ဆုံချက်တခုတည်းတွင် စုစည်းမိနိုင်မည့် ဗဟိုချက်မမျိုး ယနေ့ကာလတွင် ကျနော် မမြင်မိသေးပါ။ တနိုင်ငံလုံးကို ဖြန့်ကျက်၊ စည်းရုံး၊ လူထုအများကြား ပျံ့နှံ့သွားဖွယ် လှုပ်ရှားမှုများလည်း မမြင်မိသေးပါ။
သေချာသည်ကတော့ ခံစစ်သေ အနေအထားဖြင့် ကျနော်မသွားလိုလှပါ။ သို့သော် သေချာသော အဖြေလည်း ကျနော့ တွင် ရှိမနေပါ။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတခုတည်းဖြင့် ပွဲအပြီးဟု ယူဆထားရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုကြီးကို ရေရှည်ဖြတ်သန်းရမည့် ခရီးစဉ်တခုဟု သတ်မှတ်ယူဆလျှင်ဖြင့် ၂၀၁၀ ရွေး ကောက်ပွဲသည်လည်း ကျနော်တို့ မကြိုက် သော်လည်း၊ ကျနော်တို့ မျှော်မှန်းထားသည့် လမ်းနှင့် လွဲနေသော်လည်း မလွဲမသွေ ဖြတ်သန်းကြရမည့် အဆင့်တခု၊ လှုပ်ရှားမှုတခုဟု ယူဆမိပါတော့သည်။
အောင်သူငြိမ်းသည် ပြည်ပတွင် နေထိုင်၊ အလုပ် လုပ်ကိုင်နေသည့် အလွတ်သုတေသီတဦး ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Sanghaalliance at 9:34 AM0comments
Posted by Sanghaalliance at 1:21 AM0comments
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း မအောင်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က တောရွာတစ်ရွာမှာ ဆရာမသွားလုပ်ခဲ့တယ်။ ကျောင်းသားတွေ နားလည်အောင် စာကို ရှင်းမပြတတ်တော့ အလုပ်ထုတ်ခံလိုက်ရတယ်။ ပါးပြင်ပေါ် ကျလာတဲ့ မျက်ရည်တွေကို အမေက ပွတ်သပ်ပေးရင်း 'သမီးနဲ့ သင့်တော်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုတော့ ရှိမှာပါ' လို့ သူ့ကို နှစ်သိမ့်ခဲ့တယ်။
အဲဒီနောက် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မြို့ပေါ်တက်ပြီး အလုပ်သွားလုပ်ခဲ့တယ်။ မကြာဘူး.. အင်္ကျီစညှပ်ရာမှာ နှေးကွေးလွန်းတယ် ဆိုပြီး အလုပ်ထုတ်ခံလိုက်ရပြန်တယ်။ 'မကျွမ်းကျင်သေးတဲ့ အလုပ်မှာ စစချင်း နှေးကွေးတာ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ သမီးက ဘာမှ မလုပ်ဖူးဘဲ ကျောင်းပဲတက်ခဲ့လို့ ဖြစ်လိမ့်မယ်' လို့ အမေက သူ့ကို နှစ်သိမ့်ပြန်တယ်။
အမေရဲ့ အဖြေက ရိုးရိုးလေးပါ။ အမေက ပြောတယ်.. ' မြေတစ်ကွက်မှာ ဂျုံစိုက်လို့ မဖြစ်ထွန်းရင်၊ ပဲပြောင်းစိုက်ကြည့်ပါ။ ပဲစိုက်လို့လဲ မဖြစ်ထွန်းရင် နေကြာ စိုက်ကြည့်ပါ။ နေကြာစိုက်လို့လဲ အဆံတွေ မပြည့်ခဲ့ရင် တစ်ခြားအပင် ပြောင်းစိုက်ကြည့်ပါ။ ပန်းပွင့်မှာတော့ သေချာတယ်။ မြေတစ်ကွက်အတွက် သင့်တော်တဲ့ ပျိုးပင်တစ်ပင်တော့ ရှိပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ ရိတ်သိမ်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်'
မြေတစ်ကွက်အတွက် သင့်တော်တဲ့ ပျိုးတစ်ပင်တော့ ရှိပါတယ်။ ပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့ သဲကန္တာရမှာ ရှားစောင်းပင်တွေတောင် လှပတဲ့အပွင့်နဲ့ ရှင်သန်ပေါက်ရောက် နိုင်သေးတယ်။ ဘယ်နေရာ၊ဘယ်ဒေသပဲ ရောက်ရောက် ကိုယ်နဲ့သင့်တော်တဲ့ နေရာတစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။သင့်တော်တဲ့ နေရာမှာ ကိုယ်တတ်စွမ်းသလောက် လှပတဲ့ အပွင့်တွေကို ဖူးပွင့်ကြရအောင်....
မူရင်းရေးသားသူ Wen-Yin Chen (陳文英) မူရင်းကို ဒီနေရာမှာ ကြည့်ပါ။
အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာ သွားသုံးတဲ့အခါ အထူးသတိထားရမယ့် အချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်။
အဲဒါကတော့ ကိုယ်သုံးမယ့် Keyboard ကြိုးနဲ့ Computer System Unit နဲ့ ချိတ်မယ့် ပလပ်ပေါက်မှာ အနက်ရောင် Device လေးတစ်ခု ခံထားပြီဆိုရင် အဲဒီ ကွန်ပျူတာမှာ မသုံးပါနှင့်တော့။
ဒီ Black Device ကို နိုင်ငံအချို့မှာတော့ ဟိုတယ်တွေ၊ ကုန်စည်ပြပွဲတွေ၊ လေဆိပ်တွေနဲ့ အင်တာနက်ကဖေးတွေမှာ အများအားဖြင့် သုံးကြတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အင်တာနက်ကဖေးတွေမှာ သုံးဖို့များတယ်။ သေချာစစ်ကြည့်ပြီးမှ သုံးပေါ့၊ သေချာအောင် ပုံပါထည့်ပေးလိုက်တယ်။
Web: တစ်ခုမှ ကူးယူမျှဝေပေးလိုက်ပါသည်။
Posted by Sanghaalliance at 11:10 PM0comments
souls of 88
ရုတ်တရက် မျက်စိများ အလွန်ကျိန်းစပ်သွား၍ ချင်းမိုင်တုန်းက လေထု ညစ်ညမ်းသဖြင့် မချွတ်တမ်း တပ်ထားရသည့် နှာခေါင်းစည်းကို ဖြုတ်ကာ နေကာမျက်မှန် ကမန်းကတန်း ထုတ်တပ် လိုက်ရသည်။ ဦးရုက္ခစိုး တယောက် ညဘက်ကြီး နေပြည်တော် ရောက်နေခြင်း ဖြစ်၏။ သူအရင်ဆုံး တွေ့လိုက်သည်က ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ကတော် ဒေါ်ကွိုင်ကွိုင် (အမေကွိုင်) ဖြစ်သည် ... ။
အမေကွိုင်။ ။ ဟေ့ အမေတို့ကကြောက်လို့ဟေ့ .. အဲလေ၊ ထီးတင်ပွဲမှာ အဖျက်သမားတွေ နှောင့်ယှက်မှာ စိုးလို့ကွဲ့နော် .. ဘာမှတ်နေလည်း။ အမေတို့ မိသားစုကို ပြည်သူလူထုက အရမ်းချစ်တာကွဲ့ .. ကိုယ့်ဘက်က လုံအောင် တတောလုံးစိမ်းလုပ်ထားတာ ဟေ့နော်။ (ထို့နောက် တချက်သမ်းကာ နတ်ပြန်ထွက်သွားသည်)
ဂရစ်ဖစ်တက္ကသိုလ် ဂရစ်ဖစ် အာရှ အင်စတီကျု (Griffith Asia Institute) မှ အင်ဒရူးဆဲလ်သ် -Andrew Selth က ဖေဖော်ဝါရီလ ဆန်းပိုင်း နယူးဒေလီတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပဋိပက္ခလေ့လာရေး အင်စတီကျု (Institute of Peace and Conflict Studies) ၌ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံတကာ သြဇာ၏ အကန့်အသတ်များ (Burma and the limits of International Influence) ဆိုသည့် ခေါင်းစဉ်နှင့် ဆွေးနွေးရာ၌ စစ်အစိုးရနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် စစ်အစိုးရ၏ စိတ်သဘောထားကို နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝန်း က နားလည်ရန် လိုအပ်ကြောင်းဖြင့် ပြောကြားခဲ့သည် ကို မဇ္ဈိမသတင်းစာမျက်နှာတွင်ဖတ်ရပါသည်။
ဤတွင် စစ်အစိုးရ၏စိတ်သဘောထားမှာ ဘာလဲဟူသောမေးခွန်းပေါ်လာပါသည်။ ကျနော်တို့အားလုံးသိထားကြသည့် သတင်းမှောင်ချခြင်း၊ ပြောင်ငြင်းကွယ်ခြင်း၊ တရားမဲ့ဥပဒေများဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ယုံကြည်မှုအတွက် သာမန်လူများ၊ ကျောင်းသားငယ်များသာမက သံဃာများကို ပါညှဉ်းဆဲသတ်ဖြတ်ခြင်းတို့ကို မာခီးယားဗယ်လီ၏အယူအဆအတိုင်း (ကြားနေအဖွဲ့ဆိုသည့် ကျောင်းတော်သား နိုင်ငံရေးပါတီမှပြောသလို) ရပ်တည်ချက်ထိပါးလာ၍ ပြတ်ပြတ်သားသား ဆောင်ရွက်ခြင်း ဟုသာထားမည်ဆိုလျှင်၊ မတရားစီးပွားအခွင့်အရေးယူခြင်းများကို သူလည်းလေလောကီသားပေမို့ဟု နားလည်မှု ပေးကြမည်ဆိုလျှင်၊ စစ်အစိုးရ၏ ပင်မရပ်တည်ချက်မှာ (အစဉ်အာဏာတည်မြဲရေးသာ ဟု လည်း မပြောလိုဘူးဆိုလျှင်) ဘာလဲဟု စဉ်းစားကြရန်ရှိပါသည်။ ယခုဆောင်းပါးတွင် ကျနော်သိနားလည်သလောက် သူတို့ သဘောထားမှန်ကို ရှင်းပြလိုပါသည်။ ကျနော်သည် စစ်သား သားသမီးတဦးဖြစ်ပြီး ၈၈ ခေတ် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားသူ တဦးလည်းဖြစ်ပါ၍ ကျနော်တို့ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တိုင်း မသိရှိသေးသည့် အချက်များကို သိရှိသည်ဟု ထင်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ ဆွေးနွေးစရာ အချက်များတော့ရနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ယနေ့တပ်မတော်၏ ယုံကြည်ရပ်တည်ချက်က ဘာပါလဲ။ ၈၈ ခေတ်အထိတော့ ရှင်းလင်းစွာပင် ဦးနေ၀င်း၏ ရပ်တည်ချက်အတိုင်း ဖြစ် ပါသည်။ ကွန်မြူနစ်နှင့် ဓနရှင်ပါလီမာန်ဒီမိုကရေစီကို မယုံကြည်။ ယင်းတို့ နှစ်မျိုးကြား အလယ်အလတ် သွားနိုင်မည့် လမ်းစဉ် တရပ်ကို တချိန်က ထူးချွန်သော နိုင်ငံရေးသဘောတရားဆရာများအား ရေးဆွဲစေကာ စမ်းသပ်ကျင့်သုံးကြည့်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၇ တွင် အရေးပေါ်ပါတီညီလာခံခေါ်ရသည်အထိဖြစ်သွားကာ ယင်းလမ်းကြောင်းမှ သိသိသာသာခွဲကာ မိမိသဘောကျစနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့တော့သည်။ နောက်ဆုံး ၁၉၈၅ တွင် စီးပွားရေးကျဆုံးမှုကြောင့် ခေါင်းဆောင်ကြီးတိန့်ရှောင်ဖိန်ကို အားကျကာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် စ စဉ်းစားသည်။
သို့သော် ကိုယ်တိုင်ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးသော ဗြူရိုကရေစီယန္တရားကို မထိန်းနိုင်ဖြစ်ကာ ၈၈ တွင် ပြိုကျခဲ့ရသည်။ ၈၈ ခုနှစ်က ကျနော်တို့၏လှုပ်ရှားမှုသည် အင်အားပြင်းထန်တာမှန်သော်လည်း အဆိုပါ ပျက်စီးပြီး ဗြူရိုကရေစီ အဖွဲ့အစည်းကြီး လွယ်လွယ်နှင့် ပြိုမကျလျင် ထိုမျှ ခရီးမရောက်နိုင်သည်မှာ သေချာပါသည်။ ထိုအခါ ဦးနေ၀င်းက သူ့သဘော အတိုင်း နောက်ဖဲတမျိုးချိုးပြီး စစ်တပ်ကို အာဏာပြန်သိမ်းစေခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က တပ်တွင်း အရာရှိများဖြစ်နေသော၊ ကျနော်တို့နှင့်ကျောင်းနေဖက်မှ စစ်ထဲရောက်သွားကြသော သူတို့ကို မည်သို့လမ်းညွှန်ခဲ့သနည်း။ ထိုစဉ်က ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်တို့ ရှင်းလင်းပွဲတွေမှာ ပေါ်လွင်ပါသည်။ စစ်တပ်၏ရန်သူဖြစ်သော ကွန်မြူနစ်များကြိုးကိုင်မှု နှင့် ကိုလိုနီလက်သစ်လုပ်လိုသော (မှတ်ချက်။ အဆိုပါစကားမှာ ကွန်မြူနစ်စကားဖြစ်ပါသည်) နယ်ချဲ့နိုင်ငံကြီးများ၏ ကြိုးကိုင်မှုဖြစ်သည်ဟု သူတို့ရဲဘော်တွေကို သင်ပြခဲ့ပါသည်။ ယနေ့အထိလည်း သည်အတိုင်း သင်ကြားပို့ချဆဲဖြစ်ပါသည်။
နောက်ပိုင်း ဦးနေ၀င်းကို သူတို့ရှင်းထုတ်ပစ်နိုင်ခဲ့သော်လည်း ယနေ့ခေါင်းဆောင်များသည် ဦးနေ၀င်းကဲ့သို့ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ နှင့် စစ်အေးကာလ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး အတွေ့အကြုံရှိသူများ မဟုတ်ပါ။ စစ်အေးကာလအတွင်း ဦးနေ၀င်းကဲ့သို့ အမျိုးသားရေးနှင့် ဘက်မလိုက်ရေးဝါဒများဖြင့် ရပ်တည်နိုင်အောင် မစွမ်းနိုင်ကြပါ။ နိုင်ငံရေးကစားသည့် သီအိုရီလည်း မကျွမ်းကျင်ကြပါ။ သို့သော် သူတို့အတွက် နည်းလမ်းရှိလာခဲ့ပြီး ယနေ့ကာလ အချို့ ကမ္ဘာ့ပညာရှင်ဆိုသူများ၊ သတင်းစာဆရာကြီးဆိုသူများပင် ချီးမွမ်းရလောက်အောင် နိုင်ငံရေးကို ပိုင်နိုင်သည်၊ အာဏာနိုင်ငံရေးကို ကျွမ်းကျင်သည် ဟု သုံးသပ်လာရသည့် အခြေအနေသို့ စွမ်းဆောင်ခဲ့သည်မှာ အဓိက အကြောင်းတရား ၂ မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ပထမအကြောင်းတရားသည် သူတို့အား တွန်းပို့ပေးနိုင်သည့် တွန်းအားဖြစ်ပြီး ဒုတိယ အကြောင်းတရားသည် နည်းပရိယာယ်ဖြစ်ပါသည်။
ပထမအကြောင်းတရား (သို့မဟုတ်) စစ်တပ်ဝါဒ
စစ်တပ်ဝါဒ ဟု အမည်တတ်သဖြင့် ကြမ်းတမ်းစွာသုံးနှုန်းလိုခြင်း မဟုတ်ပါ။ ယနေ့ ရွေးကောက်ပွဲအထိမှန်းလာသည့် အယူအဆကို ဖြစ်စေသည့် ၀ါဒတရားဖြစ်ပါသည်။ (မှတ်ချက်၊ ဦးနေ၀င်း သည် ၁၁ နှစ်အကြာတွင် ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ခဲ့ပြီး ယခု ဦးသန်းရွှေက ၂၂ နှစ်ကြာမှ လုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။) ဦးနေ၀င်း၏ စစ်သည်တော်ကျင့်ဝတ်တွင် စတင်ခဲ့သော ၀ါဒဖြစ်ပါသည်။ စစ်တပ်အတွင်း မည်သည့်ပုံစံဖြင့် ၀င်လာသည်ဖြစ်စေ စည်းကမ်း (ဤတွင် အမိန့်နာခံမှုကို ၄င်းတို့က စည်းကမ်းဟုခေါ်ပါသည်) ကျနအောင် ပုံသွင်းပေးလိုက် ပါသည်။ ငယ်စဉ်က လမ်းစဉ်လူငယ် စစ်ရေးပြ သင်တန်းဆင်း ကျနော့်ကို အစ်ကိုဝမ်းကွဲ စစ်ဗိုလ်က မေးဖူးပါသည်။ “ညီလေး စစ်ရေးပြဆိုတာ ဘာလုပ်တာလဲ မင်းသိလား” ကျနော်က စည်းကမ်းကျအောင်သင်ပေးတာ ထင်ကြောင်း ပြောသောအခါ “မဟုတ်ဘူးကွ၊ အဲဒါ အမိန့်ကို မစဉ်းစားဘဲနာခံတတ်အောင် ပုံသွင်းပေးတာ။ သတိ သက်သာ အေးစေ ပြောတဲ့အခါ မင်းက မစဉ်းစားဘဲ ချက်ခြင်း လုပ်လိုက်တယ်မဟုတ်လား။ ဒီ လို ဘာမှမဟုတ်တဲ့ အပြုအမူလေးကစပြီး မစဉ်းစားတဲ့အကျင့် သွင်းပေးတဲ့အခါ ရှေ့တန်းမှာ “တက်” လို့ အမိန့်ပေးတဲ့အခါ မစဉ်းစားဘဲ တက်တဲ့အကျင့်ရသွားတာပေါ့” စာဖတ်နာသော ကျနော့် အစ်ကိုသည် စစ်တပ်ထဲမှာ ရာထူးသိပ်ကြီးကြီးမရပါ။ ရှင်းပါသည်။ သို့သော် ထိုစဉ်က ၁၈ နှစ်သား ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဖြစ်လာသည့် ကျနော့်အတွက် ပညာရပါသည်။
စစ်ရေးပြဖြင့် ပုံသွင်းပြီးနောက်ပိုင်း ပင်ပန်းမှု၊ အနားမနေရမှုတို့ကို ဆက်လက်ပို့ချပါသည်။ fatigue ခေါ် အားလပ်ချိန်မရအောင် ထားသော အလုပ်များကို ဆက်တိုက်ခိုင်းပါသည်။ ကျနော့် မိခင်ဖြစ်သူသည် အိမ်ဖော် အပျိုရွယ်လေးများ ထားသည့်အခါ တမျိုးပြီး တမျိုးခိုင်းသောကြောင့် ကျနော်က မေးဖူးပါသည်။ အမေက “ဒီအရွယ် အားနေရင် တောင်စိတ် မြောက်စိတ်တွေ ၀င်တတ်တယ် သားရဲ့ ဒါကြောင့် မအားအောင် တမင်ရှာခိုင်းရတာ” ဟုပြောပြပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် စိတ်ရောလူပါ မလွတ်လပ် အောင် ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သည်နောက်မှာတော့ ရှေ့တန်းထွက်ခြင်း၊ (မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မသိဘဲ) စစ်ပွဲဆင်နွှဲခြင်း၊ တို့တွင် မိမိရဲဘော်များ မိုင်းထိ၍ ခြေပြတ်လက်ပြတ်ဖြစ်ရခြင်း၊ သေဆုံးရခြင်း၊ ရန်သူက သတ်ဖြတ်ခြင်း တို့ဖြင့် ဆက်လက် သင်ကြားပို့ချပေးပြန်ပါသည်။ နောက်ဆုံးအဖြေတခုသို့တွန်းပို့ပါသည်။ ယင်းသည် ဆိုခဲ့သော “စစ်တပ်ဝါဒ” ဖြစ်ပါသည်။ ရှင်းအောင်ဆိုရလျှင် -
မိမိတို့သည် (တိုင်းပြည်အတွက်) သူများထက် အပင်ပန်းခံအလုပ်လုပ်ရသည်။
မိမိတို့သည် (တိုင်းပြည်အတွက်) သက်စွန့်ဆံဖျား အလုပ်လုပ်ရသည်။
(ဘာကြောင့်မှန်းမသိဘဲ ဖြစ်သွားသော) ရန်သူကြောင့် မိမိတို့ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေ ထိခိုက်သေဆုံးရသည်။
မိမိတို့ကို နှိပ်စက်ခဲ့သော ယင်း ရန်သူကို ပြည်သူတချို့ ထောက်ခံနေသည်။
မိမိတို့သည် အမိန့်နာခံရသည်။ စစ်စည်းကမ်းဖြင့် အချိန်ပြည့် နေရသည်။ ညအိပ်နေစဉ် လာနှိုးလျင် သက်စွန့်ဆံဖျား ခရီး စတင်ရသည်အထိ ၂၄ နာရီထမ်းဆောင်ရသူများဖြစ်သည်။
ထိုအချိန်တွင် သာမန်ပြည်သူများ၊ ၀န်ထမ်းများ (ယင်းတို့စကားအရ “အရပ်သားများ”) သည် သက်သက်သာသာ နေရသည်။ အသက်စွန့်ရန်မလို၊ စည်းကမ်းမရှိ၊ အားလပ်ချိန်တွေ အပြည့်ရှိနေသည် ။ စီးပွားရေးလုပ်ပြီး ချမ်းသာနေသည် … ဟူသော အတွေးကို ဆက်တိုက် ပို့ချပေးပါသည်။ ထိုသို့သော အနစ်နာခံမှုများကြောင့် သူတို့တွင် “နိုင်ငံတော်အာဏာ” ကို သုံးပိုင်ခွင့်ရှိသည် ဟု အဖြေထုတ်ပေးပါသည်။
ပြည်သူလူထုနှင့် စစ်တပ်အတွင်းအကြီးမားဆုံး အတားအဆီးသည် အဆိုပါအတွေးအမြင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော် ပညာရှင်ဘ၀ စစ်တပ်နှင့် တွဲ၍ တောထဲတောင်ထဲသွားရသည့်အခါ စစ်ဗိုလ်တွေ အင်မတန်အံ့သြကြပါသည်။ သူတို့မှလွဲ၍ မြို့ပေါ်တွင် တိုက်ပုံ ၀တ်နေသော လူပျော့များ ဤသို့ အပင်ပန်းခံနိုင်မည်၊ အပင်ပန်းခံအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်ဟု မထင်ခဲ့ကြပါ။ အင်္ဂလန်မှ ဘွဲ့ထူးတွေ ရလာသည့် ဆရာဝန်ကြီးသည်လည်း ညလာနှိုးလျှင် ထလိုက်ရမှန်း ဂျူတီယူရမှန်းသူတို့မသိကြပါ။ (အစပိုင်းတွင် မသိကြပါ၊ နောက်ပိုင်းရာထူးရလာတော့လည်း မသိချင်ကြတော့ပါ)။ တနှစ်က တက္ကသိုလ်ဆရာမလေးတဦး ကျောင်းသားများနှင့် ကွင်းဆင်း ခရီးထွက်လာစဉ် လက်နက်ကိုင်လက်ချက်နှင့် ကွယ်လွန်ပါသည်။ ၀န်ထမ်းတိုင်း၊ ပြည်သူတိုင်း မှာ လက်နက်မဲ့ သက်စွန့်ဆံဖျား မှုတွေ ပြည့်နေကြောင်း သတိမထားမိကြပါ။
နောင်တချိန်တွင် ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသူများအားနှိမ်နင်းသည့်အခါ နိုင်ငံတကာက ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းချခံရခြင်း ဟုမြင်သော်လည်း သူတို့လို ပင်ပန်းစွာအလုပ်မလုပ်ရဘဲ အခွင့်အရေးတောင်းသူများဟု ဆက်လက်မြင်လာပါတော့သည်။
သည်ထက် ပိုကြီးသည့် စစ်တပ်ဝါဒတစ်ရပ်မှာ နိုင်ငံခြားသားကို အထင်ကြီးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံခြားသားမုန်းတီးခြင်း (xenophoebia) သည် အထင်ကြီးရာမှ ကြောက်လန့်မုန်းတီးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသည် မိမိတို့ ကြိုးစားသော်လည်း တိုးတက်မှု မရလာသည့်အခါ ကြီးသောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်လာပါသည်။ နိုင်ငံခြားသားကို ပိုမို အလုပ်လုပ်သူ၊ ပိုမို ဥာဏ်ကြီးသူ ဟုမြင်ပါသည်။ ပြည်ပတွင် တိုးတက်ခြင်းသည် ယင်းလူမျိုးများ အလုပ်လုပ်၊ ဥာဏ်မြင့်သောကြောင့်ဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည် မတိုးတက်ခြင်း မှာ စစ်တပ်တတပ်လုံး အလုပ်လုပ်သော်လည်း ပြည်သူတွေ၊ ၀န်ထမ်းတွေ အလုပ်မလုပ်သောကြောင့် မတိုးတက်ခြင်းဟုမြင်လာပါသည်။ သည်အတိုင်းလည်း သင်ကြားပေးပါသည်။ သာမန်ပြည်သူတွေမှာတော့ နိုင်ငံခြားသွားအလုပ် လုပ်ကြသည့်အခါ နိုင်ငံခြားသားကို သူလိုကိုယ်လို ဟုသာမြင်ပါသည်။ အလုပ်လုပ်သလောက်အခွင့်အရေးရသဖြင့် အလုပ်လုပ်ကြ သည်။ စည်းကမ်းရှိသလောက် စည်းကမ်း၏အကျိုးကို ခံစားရသဖြင့် စည်းကမ်းနှင့်နေကြသည်။ သူတို့လို ကိုယ်လည်း အခွင့်အရေး ရရင် ကိုယ့်တိုင်းပြည်လည်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်းနားလည်ကြသည်။ ကြီးမားသော အတွေးအခေါ်ကွာဟမှုကြီးဖြစ်ပါသည်။
ထိုမှတဆင့်တိုးသောအခါ စစ်တပ်က ပိုအလုပ်လုပ် အနစ်နာခံရတဲ့အတွက် အခွင့်အရေးယူထိုက်သည်ဟု မြင်လာပါတော့သည်။ နိုင်ငံရေးသမားများအား နိုင်ငံတော်အာဏာကို ဖြတ်လမ်းနည်းဖြင့် ရယူလိုသည်ဟု စွပ်စွဲပေးလိုက်ပါသည်။ တပ်ထဲတွင် နေခဲ့သော ငယ်စဉ်က ကျနော်ကိုယ်တိုင်သည် အမိန့်နှင့် အာဏာကို ယုံကြည်ပါသည်။ နောင် ၈၈ ခေတ်ကိုကျော်မှ စည်းရုံးရေးကို ယုံကြည် လာပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်က ပုံသွင်းပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် စည်းရုံးရေးကို ယုံကြည်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း သည် အမိန့်နှင့် အာဏာကို ယုံကြည်ခဲ့ခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲ အမွေဖြစ်ပါသည်။
အထက်ပါ စစ်တပ်ဝါဒ သည် နိုင်ငံတကာ၊ ဘာသာတရားနှင့်၊ နိုင်ငံရေးသဘောတရားများ သိရှိနားလည်လာသည့် အရာရှိကြီး များဖြစ်လာသည့်အခါ မိမိတို့၏ အထက်ပါ ကျင့်ထုံးများနှင့် ဆန့်ကျင်ဆုံးဖြတ်မှုတိုင်း၊ အဖြေတိုင်းအတွက် စိတ်ဖြေစရာ ဆေးကောင်း ကြီး တခွက်ဖြစ်လာပါတော့သည်။ ယနေ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံး ဤအတိုင်း ယုံကြည်ကြသည်မှာ မှားယွင်းဖွယ် မရှိပါ။
ဒုတိယအကြောင်းတရား (သို့မဟုတ်) ပုံတူကူးခြင်း
ဦးနေ၀င်းအားဖယ်ရှားပြီးသည့်အခါ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများအတွက် လမ်းကြောင်းချပေးမည့်သူမရှိတော့သလောက်ဖြစ်ပါသည်။ (ထိုမတိုင်ခင် အာဏာသိမ်းပြီးကာလက ဒေါက်တာမောင်မောင်နှင့်တကွ ပါတီခေတ်ခေါင်းဆောင်များ Policy နှင့် လမ်းညွှန်မှုများ ချပေးခဲ့ပါသည်။) သို့ရာတွင် အတန်အသင့် အမြင်ကျယ်သူ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်သည် မဟာဗျူဟာလေ့လာရေးဌာနကို (အမေရိကန်ပုံစံအတိုင်း) ထူထောင်ကာ ပညာတော်သော စစ်ဗိုလ်ငယ်များမှအစ ခေါင်းခေါက်ရွေးယူ၍ ထောက်လှမ်းရေးဌာနချုပ် တွင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးအလိုက် အထူးပြုတာဝန်အမျိုးမျိုးဖြင့် လေ့လာ လေ့ကျင့်စေခဲ့သည်။ အမေရိကန်နှင့် အီးယူ၊ ဂျပန် တို့သို့ နိုင်ငံရေးအောက်လမ်းနည်းများဖြင့် ချဉ်းကပ်ခဲ့သည်။ စစ်အစိုးရ၏ လမ်းပြမြေပုံ နှင့် နေပြည်တော်စီမံကိန်း၊ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး တက္ကသိုလ်ခေါ် ပေါ်လစီ စီမံကိန်းများကို သူ၏ ဦးခေါင်းများဖြင့် ဆွဲယူခဲ့သည်။
နောင်တချိန် ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်မရှိသောအခါ စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်များအတွက် နမူနာပေါင်းများစွာ၊ စကားလုံးပေါင်းများစွာ (ယနေ့နောက်ဆုံးပေါ် - ရိုဟင်ဂျာမဟုတ်၊ ဘင်္ဂါလီ ဆိုသည့် စကားလုံးမျိုးအထိ) အရန်သင့်ရှိထားပြီဖြစ်သည်။ ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ်တွင် အရည်အချင်းရှိသော ပညာတတ်ဗိုလ်မှူးကြီးများ၏ သုတေသနကျမ်းများ ရှိနေသည်။ ဒီပဲယင်း အရေးအခင်းကို “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အန္တရာယ်ကာကွယ်ရေး” ဟူသော သုတေသနစာတမ်းအတိုင်း ဖန်တီးခဲ့သည်။ UN ကိုယ်စားလှယ် ဂန်ဘာရီမလာမီ ပြည်တွင်းတာဝန်ခံကို မောင်းထုတ်ပြခြင်း၊ ယင်းမှတဆင့်ချင်းရှေ့တိုးလာပြခြင်း၊ အမေရိကန် စစ်ရေယာဉ်မ၀င်နိုင်မီ အာဆီယံ၊ UN တို့နှင့် အစည်းအဝေးလုပ်ပြခြင်း စသည်ဖြင့် နည်းဗျူဟာမျိုးစုံကို အသစ်ဖန်တီးယူခြင်း ထက် ဦးနေ၀င်းလုပ်ခဲ့သည့် ခြေလှမ်းများကို အနီးစပ်ဆုံး ပုံတူကူးချခြင်းများဖြစ်သည်။ ကွန်မြူနစ်၊ ဆိုရှယ်လစ်တို့ကို မယုံကြည် သော်လည်း ထို ၀ါဒကျင့်သုံးသူ တို့၏ နည်းပရိယာယ် လုပ်နည်းလုပ်ဟန်များကို လေ့လာကြသည်။ ဤသည်မှာလည်းမဆန်း၊ မဆလခေတ်တွင်သူတို့ ကြီးပြင်းလာကြပေရာ (တနည်းအားဖြင့် လူရာဝင်လာရပေရာ) ထိုခေတ်က သင်ကြားခဲ့သော နိုင်ငံရေးသမား မုန်းတီးရေးတရားများ၊ ဦးနု မကောင်းကြောင်းများ၊ ပါတီစုံနှင့် ဖက်ဒရယ်မူ မကောင်းကြောင်းများ သည် အသည်းတွင် စွဲထင်နေပေပြီ။ ထိုခေတ်တလျှောက်လုံး ဖတ်စရာနိုင်ငံရေးစာအုပ်ဆို၍ လက်ဝဲစာပေသာရှိရာ ထို စာပေတို့မှ လက်ဝဲ၀ါဒ တော်လှန်ရေးသမားတို့၏ ကောင်းကွက်များ အယူအဆကောင်းများကို အရမယူနိုင်သောအခါ မကောင်းသော လုပ်နည်းလုပ်ဟန်များကိုသာ ကူးယူရပေတော့သည်။ “ဆန့်ကျင်ကြ၊ ဆန့်ကျင်ကြ” ဆိုသည့် လက်မောင်းတန်းအော်ဟစ်မှု များကို သူတို့ရိုက်သောရုပ်ရှင်ထဲမှ အလံနီတို့ထံမှအရယူသည်။ ကျနော့်နားထဲတွင် “သတ်ပစ်၊ သတ်ပစ်” ဆိုသည့်အသံများ ကြားယောင် မိရသည်။
အရေးအခင်းပြီးခါစက အားလုံးသပိတ်မှောက်ပြီး ဖြစ်နေသည့် ၀န်ထမ်းများဖြင့် မည်သို့ဆက်လက်အုပ်ချုပ်မည်နည်းဟု ကျနော်တို့တွေးခဲ့ဖူးသည်။ တပြည်လုံးသပိတ်မှောက်လျင် တိုင်းပြည်ကို အုတ်တံတိုင်းခတ်ရုံပေါ့ဟု ပြောခဲ့ကြသည်။ သို့သော် အာဏာမသိမ်းမီတွင် မော်စီတုန်း၏ နည်းလမ်းတခုကို ကျနော်ဖတ်မိသည်။ ယင်းမှာ “အစွန်းရောက်လူနည်းစု ကို တိုက်ရိုက်နှိမ်နင်းခြင်း၊ အလတ်တန်းစားလူများကို တွေဝေယိမ်းယိုင်စေခြင်း နှင့် နောက်တန်းက လူုထုကြီးကို မိမိ လူဟု အမည်တပ်ခြင်းဖြင့် တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲယူခြင်း” လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါသည်။ ကူးယူတတ်သော စစ်အုပ်စုသည် ထိုအတိုင်း တသဝေမတိမ်းကျင့်သုံး ပါသည်။ ယနေ့တိုင်လည်း ပြည်တွင်းသာမက ပြည်ပနိုင်ငံများအထိပါ တိုးချဲ့ယူလာရာ အာဆီယံသည် ထိုလမ်းစဉ်မှ အလယ်အလတ်တန်း စားအုပ်စုဖြစ်လာပါသည်။ အတိုက်အခံထဲမှလည်း အဆိုပါ အလယ်အလတ်တန်းအုပ်စုကို ဆွဲယူနေပါပြီ။ တွေဝေသော (ကွန်မြူနစ်စကားဖြင့် ဆက်ပြောလျှင် ပညာတတ်များ) လူတချို့သည် ပါတီဖွဲ့အရွေးခံရန်၊ ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံရန် လမ်းစဉ်ကို ရွေးနေကြလေပြီ။ စစ်တပ်သည် သာမန်အားဖြင့် ကျောင်းသားများကို မထလာအောင် နှိပ်ကွက် ထားလိုသည်မှအပ နိုင်ငံရေးသမားများ လောက် အမြင်မကြည်မှုမရှိသည်ဖြစ်ရာ (သူတို့သင်ခဲ့သော ဦးနေ၀င်းခေတ် သမိုင်းစာအုပ်များတွင်လည်း ကျောင်းသားများ အမြင်မှား၍သာ နိုင်ငံရေးလုပ်ကြကြောင်း သင်ခဲ့ရရာ) ကျနော်တို့ ၈၈ ကျောင်းသားများကိုလည်း အလယ်အလတ် လူစုတွင်ပါဝင်မည်လားဟု ထင်ကာ လွှတ်ပေးထားခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ တွင်မှ အစွန်းရောက်စာရင်း သို့ ထည့်သွင်းခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ခြုံငုံ၍ဆိုရလျှင် စစ်တပ်၏ မကောင်းမှုများကို နားလည်မှုပေးသည့်တိုင် ယင်းတို့၏ ရပ်တည်ချက် သဘောထားသည် မှားယွင်းစွာ သင်ကြားလာသော အခြေခံအပေါ်မှ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းသူပြည်သားများ အမှန်တကယ်ခံစားမှု၊ အမှန်တကယ် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြပြီး အကျိုးမရကြမှု၊ ယင်းတို့ အထင်ကြီးသော ပြည်ပနိုင်ငံသားများကဲ့သို့ အရည်အချင်းရှိသူများစွာ ရှိနေမှု၊ ယင်းတို့ကဲ့သို့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်စွာ၊ သက်စွန့်ဆံဖျား တိုင်းပြည်အတွက် အလုပ်လုပ်နေသူများရှိနေမှုတို့ကို ယနေ့တိုင် သိမြင်လာကြခြင်း မရှိသေးပါ။ ပြည်သူလူထုနှင့် အမှန်တကယ် နီးနီးစပ်စပ် နေထိုင်လိုစိတ်၊ နားလည်အောင်လုပ်လိုစိတ် နည်းပါးအောင် ကြိုတင် လေ့ကျင့်ပေးထားခြင်းဖြင့် အရပ်ဘက်တာဝန်ယူရသည့်တိုင် အစဉ်ကင်းကွာ နေလေ့ရှိသည်။ နားလည်သွားသော အရာရှိများသည်လည်း ဘေးဖယ်ခြင်း ခံသွားကြရသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ယနေ့ခေတ် ပင်စင်ယူသွားသော စစ်ခေါင်းဆောင်အားလုံးသည် လက်ရှိစစ်တပ်၏ ဘေးဖယ်ခြင်းကို ခံကြရသည်ဖြစ်ရာ လက်ရှိခေါင်းဆောင်ကြီး များ တသက်တာ မည်သည့်အခါမျှ အငြိမ်းစားမယူရဲတော့သည့်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိကုန်ကြခြင်းဖြစ်ပေသည်။
ကမ္ဘာ့ ဆိုးရွားယုတ်မာ ရက်စက်ဆုံး မုဒိမ်းမှုနှင့် လူကုန်ကူးမှုဒဏ်ကို
မြန်မာနှင့် မွန်မလေးများ ခံစားနေရ
၇ရက်ဇူလိုင် ၂၀၀၇ မနက်၃နာရီမှာ ပင်လယ်စာ စက်ရုံမှ အချိန်ပို အလုပ်
ဆင်းပြီး အတူတူ ပြန်လာတဲ့ မြန်မာမိန်းကလေး ၅ယောက်ကို ဒေသခံ ရဲကပါ
မနိုင်လို့ လက်လျှော့ထားရတဲ့ ထိုင်းမာဖီယား ဂိုဏ်းဝင် ၁၀ ယောက်က လိုက်လံ
ဖမ်းဆီး ရာမှာ ၄ယောက်ထွက်ပြေး လွတ်မြောက် သွားပြီး အလုပ်သမားလက်မှတ်
တရားဝင် လက်ဝယ် ရှိသူ အသက် ၂၂နှစ် အရွယ် မိန်းကလေး တစ်ယောက် အဖမ်းခံ
ခဲ့ရပါတယ်။ သူမကို ဖမ်း မိရာ လယ်ကွင်း ထဲမှာပင် အဓမပြုကျင့် ခဲ့ကြပြီး
နောက် သူတို့ဂိုဏ်း တည်ရှိရာ တိုက်သို့ ခေါ်ဆောင် သွားကာ ကျန်ဂိုဏ်သား
လေးယောက် က ထပ်မံ စော်ကားကြပြန်သည်။
သူမသည် ၈ရက် ဇူလိုင်တွင် အားကုန် ကြိုးစားပြီး ၄ထပ်တိုက်ပေါ်မှ ခုန်ချပြီး
ထွက်ပြေး လွတ်မြောက် လာခဲ့ရာ မဟာချိုင် ခရိုင်ရှိ ဇီဝိချိုင်ဆေးရုံတွင်
တက်ရောက် ဆေးကုသ ခံနေခဲ့ ရသည်။ သူမကို ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်ခဲ့ရာ တိုက် ခန်း
တွင် မိန်းကလေး အယောက် ၂၀ ခန့်လည်း ဖမ်းဆီးခံ ထားရ ကြောင်း၊ သူမအဖမ်းခံ
ထားရ ချိန် တိုတောင်း သောကြောင့် ၊ ထိုမိန်းကလေးများ မည်သည့်လူမျိုးများ
ဖြစ်သည်ကို မသိခဲ့သော်လည်း အ များစု မှာ မွန်နှင့် မြန်မာမ လေးများ
ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုမိန်းကလေးများ အားလုံးကို အ၀တ်ဆင် မပေး ထား ကြောင်း၊
ထိုမိန်းကလေးများနှင့် သူမကို လိင်စိတ်ကြွဆေးများ အတင်း တိုက်ကျွေးပြီး
လူမဆန်စွာ အနိုင်ကျင့်ခဲ့ကြောင်း၊ အနိုင်ကျင့်ရင်းလည်း နင်တို့ ခွေးမတွေ
ငါတို့က နင်တို့ မွန်နဲ့ မြန်မာတွေကို ခွေးလောက်ပဲ သဘောထားတယ် စသည်ဖြင့်
ရိုင်းစိုင်းလွန်းစွာ ပြောဆို ကြိမ်းမောင်း ခဲ့ကြောင်း၊ နင် တို့ကို
လေ့ကျင့်ပေးပြီးရင် လှေတွေဆီ ရောင်းစားမှာ ဟုလည်း ပြောခဲ့သေးကြောင်း
ရဲသို့အကြောင်း ကြား ခဲ့သော်လည်း မည်သည့် အရေးယူမှုမှ မပြုလုပ် ခဲ့ကြောင်း
မဟာချိုင်ဒေသသည် ပင်လယ်စာ ထုပ်ပိုးပြင်ဆင်သော စက်ရုံများ ထွန်း ကား ပြီး
စက်ရုံပိုင်ရှင် သူဌေး များသည် ကိုယ်ပိုင် ငါးဖမ်း စက်လှေ များလည်း
ရှိလေ့ရှိကြပြီး ငါးခိုးဖမ်းလှေလည်း များစွာ ပိုင်ဆိုင် လေ့ရှိကြ သည်။
ထပ်မံ စုံစမ်းချက်များအရ ထိုမိန်းကလေးများကို ပင်လယ်တွင်း ငါးဖမ်းစက်လှေ
များ တွင် လှေသားများ ပိုမို အလုပ်လုပ် ချင်စေရန် ပျော်ပါးရန် အပြီး
ရောင်းစား ပေးလေ့ ရှိပြီး ထို လှေ သား များကလည်း စိတ်တိုင်းကျ
ပျော်ပါးပြီးသောအခါ ၀န်ဆောင်မှု မပေးနိုင် တော့သော ထို မိန်းက လေး များကို
ကိစ္စ လက်စဖျောက် ပင်လယ်တွင်း ပစ်ချခဲ့ လေ့ရှိ ကြောင်း၊ အဆိုပါ လူမဆန် သော
အကြမ်းဖက် လူ ကုန်ကူးမှု တွင် ထိုင်း ရဲများ ကိုယ်တိုင် တရားမ၀င် ပါဝင်
ပတ်သက် နေကြောင်း သိရှိ ရသဖြင့် မခံမရပ်နိုင် ဖြစ်ပြီး ထိုကိစ္စများကို
အဓိကထား ကူညီသော Pavena foundation သို့ အကြောင်းကြားခြင်း၊
ထိုင်းစစ်ထောက်လှမ်းရေးသို့ တိုင်ကြားခြင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေး
၀န်ကြီးဌာန သို့ တိုင်ကြားခြင်း၊ ထိုင်း လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ရဲဌာနသို့
တိုင်ကြားခြင်း အစရှိသည် တို့ကို ဆက် တိုက် ဆောင်ရွက်ရာ အရေးယူမှု
စတင်ခဲ့ပါသည်။ လူဆိုးများ ထွက်မပြေး နိုင်ရန် ၊ ထိုမာဖီးယားဂိုဏ်း
တည်ရှိရာ ဌာနချုပ်ကို ရဲများက ၀န်းရံထား နေ စဉ် ဘီဘီစီ သတင်း ဌာနမှ သတင်း
ကြေညာ ခဲ့သဖြင့် ဓားစာခံ ထိုမိန်းက လေး များ၏ အသက် အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရမှု
အတွက်ရော၊ မာဖီးယား ဂိုဏ်း ချုပ်နဲ့ ဂိုဏ်းသားများကို ထွက်ပြေးခွင့်
ရအောင် သတင်းပေးသလို ဖြစ်ခဲ့ သည့် အတွက် ကြောင့်ပါ သက်ဆိုင် ရာ
လှုပ်ရှားသူများ က အလွန်စိတ် ဆိုး နေခဲ့ကြ ပါသည်။
ထို့ပြင် နာမည်သာလိုချင်ပြီး ခေါင်းရှောင်တတ်သော တာဝန်ရှိသူများ ကြောင့်
ဇူလိုင် ၁၃ရက် ထိ ထို မာဖီးယား ဂိုဏ်းကို သူစီးနိုး ငါစီးနိုး နှင့်
၀င်မဖမ်းရဲဘဲ ဖြစ်နေရာ မနေနိုင်သော မြန်မာအချို့ကြောင့် ဂိုဏ်းဝင်
၃ယောက်ကို လိုက်လံဖမ်းဆီးရာ ထို၃ယောက်ကို ဒေသခံရဲတစ်ဦး၏ နေ
အိမ်ဟောင်းအတွင်း တွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး ထိုအရေးကို လိုက်လံဖော်ထုတ်
ကူညီသူ မြန်မာတစ်ဦး၏ နေအိမ်ကိုဖောက်ထွင်း ခံခဲ့ရပြီး နောက်တစ်ဦး၏
ဖောက်ထွင်းသူသည် တအိမ်လုံး အ ပြောင် သိမ်းသွားရာ လက်ကိုင်ဖုန်းပါ
ပါသွားပြီး ထိုလက်ကိုင်ဖုန်း နံပါတ် ကို ဆက်သွယ်ရာတွင် ဖောက်တာငါပဲ..
ဘာလုပ်ချင်လဲ.. ဘာဖြစ်ချင်လဲ စသည်ဖြင့် ပြန်လှန် ခြိမ်းခြောက်
သွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ထို့ပြင် ဆက်ကြေးငွေ ပေးထားသောကြောင့်
ဖမ်းရိုးမရှိသော နယ်တွင် လက် မှတ် မရှိဘဲ တရားမ၀င်အလုပ်လုပ်သူများကို
ဖမ်းသည် ဟုဆိုကာ အိမ်ခန်းများအတွင်း ဓာတ်ငွေ့သုံး ပြီး အတင်းဖမ်းဆီးမှုကို
ထူးခြား တိုက်ဆိုင် စွာ ပထမဆုံး ဖမ်းဆီးမှု ပြုခဲ့ရာ တမင် လက်စားချေ
ဖမ်းဆီးခြင်းဟု မြန်မာများက သတ်မှတ် အခဲမကြေ ဖြစ်နေကြပါသည်။
ထို့ကြောင့် မြန်မာ့အရေး ဆောင်ရွက်သူများက နောက်ဆုံး ကြိုးစားသည့်
အနေဖြင့် Pavena foundation သို့ဆက်သွယ်တိုင်ကြားခဲ့ရာ ထိုအသင်း မှ
တည်ထောင်သူ ကိုယ်တိုင် ထိုင်းရဲချုပ်သို့ တိုက်ရိုက်စာတင်အရေးယူမှု
ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက် တိုင်ကြားသူ မြန်မာမိန်းကလေး
ကိုလည်း အန္တရာယ် ကင်းစေရန် ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်ပေးထားခြင်းများ ပြု
လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအသင်းရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုကြောင့် နောက်ထပ် မာဖီးယား
ဂိုဏ်းသား ၄ ယောက်ကို ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း နောက်ထပ်လည်း
လိုက်လံဖမ်းဆီးမှုများကို ထိထိရောက်ရောက် ပြုလုပ်ပေးနေကြောင်း ရုပ်မြင်သံ
ကြား မှ ထုတ်လွှင့်ကြေညာခဲ့ရာ သတင်းကြားသိရသဖြင့် ပါဗီးနား အသင်းကြီးကို
လွန်စွာ ကျေးဇူး တင်ဖွယ်ရှိလေသည်။
သို့သော် စေ့စပ်သေချာလိုသူ မြန်မာပညာတတ် အလုပ်သမားများက
ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ဆက်လက် စုံစမ်းရာ ထိုအဖမ်းခံထားရသော ၄ယောက်မှာ
ထိုးကျွေးခံ ဘာအဆင့်မှ မရှိသော သူများဖြစ်ပြီး ထို မာဖီးယားဂိုဏ်းတွင်
အမှန်တကယ် ထိပ်ပိုင်းမှ လူများမှာ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ
ထိုဒေသရှိထိပ်တန်းအာဏာပိုင် များ ဖြစ်နေပြီး ထိုဂိုဏ်းသည် အတော်ကို
အင်အားကြီးမား သည်ကို တွေ့၇လေသည်။ ထိုမျှမကသေး ဘဲ မိန်းကလေးတစ်ဦး
ထွက်ပြေး လွတ်မြောက် ခဲ့ရာ တိုက်ခန်းတွင် ကျန်ရစ်ခဲ့သူ မိန်းကလေး ၂၀
ယောက် မှာ လုံးဝ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီး ကျန် မာဖီးယားဂိုဏ်း သားများ
ကိုလည်း ရှာမတွေ့တော့ပေ။ ဖမ်းမိသူ ၄ယောက်မှလည်း သူတို့လေးယောက်သာ
ထိုမိန်းကလေးကို ဖမ်းသည်ဟု ၀န်ခံပြီး အမှုမှန် ကို ကွယ်ဝှက်
သေးသိမ်စေခဲ့သည်။ လာမည့် ဇူလိုင် ၁၄ရက်နေ့တွင် အဆိုပါ လေးယောက်ကို
ရုံးထုတ်မည် ဖြစ်ရာ ထိုင်းများ၏ ကူညီမှုသည် နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်ရန်
သက်သက်သာ ဖြစ်ပြီး အမှုမှန်ကို သေးသိမ် ကွယ်ဝှက် သလို ဖြစ်နေခဲ့လေသည်။
ပင်လယ်စာ လုပ်ငန်းသည် ထိုင်း နိုင်ငံ၏ အဓိက နိုင်ငံခြားပို့ကုန် ဖြစ်ပြီး
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်း ထုတ်ကုန်ကို ဒေါ်လာ သန်းထောင်ချီ ထောက်ပံ့နေသော
လုပ်ငန်းဖြစ်ရာ ထို လုပ်ငန်းအတွက် မြန်မာမိန်းကလေးများကို သည်လို လူမဆန်
လွန်းစွာ အသုံးချပြီး လှေသမားများကို ပျော်တော် ဆက်စေပြီး သက်ဆိုင်ရာ
အစိုးရ ကိုယ်တိုင်က တိုင်ကြားမှုကို ဂရုမပြုဘဲ သည်လို မသိချင် ဟန်ဆောင်ကာ
ဖုံးဖိမှုကို ကန့်ကွက်သည့် အနေဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှ တာဝန်ရှိသူများကို
တွန်းအား ပေးရန် အတွက် သက်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ များ၊
အဖွဲ့အစည်းများမှ လည်းကောင်း မြန်မာ့လူမျိုးရေးကို စိတ်ဝင်စား စာနာသော
ပြည်ပရောက် မြန်မာများမှလည်းကောင်း online petition များကို
ပြင်ဆင်ကန့်ကွက် တွန်းအားပေး တောင်းဆို ပေးကြပါရန် ပန်ကြားအပ်ပါသည် ။
Posted by Sanghaalliance at 10:29 PM0comments
Burmese Monks Depict Plight, Protest
In 2007,agroup of Burmese monks led the Saffron Revolution,aseries of anti-government protests in response to military oppression. On Tuesday evening, four rally participants addressed students in Earl Hall about the plight of Burmese citizens—from human rights abuses toalack of freedom of speech to the dearth of international awareness.
The monks—U Pyinnyar Zawta, U Gawsita, U Pyinnyar Thiri, and U Agga—are part of an organization called the All Burma Monks’ Alliance, which supports Buddhist monks who helped lead the Saffron Revolution. The organization also supports political prisoners and activists still in hiding in Burma.
The monks emphasized that the goal of their protest was to peacefully oppose the Burmese military’s unfair treatment of citizens and express the need to improve civil conditions. U Agga said his intentions are “to represent these people of Burma who are suffering significantly.”
“They beat monks without reason ... we didn’t commit any crime,” U Pyinnyar Zawta said.
U Pyinnyar Thiri witnessed the beating of monks by the military junta—which calls itself the State Peace and Development Council—and fled to Thailand, eventually escaping and making it to the United States. U Gawsita met with former President George Bush to testify about his beating. U Agga arrived in the U.S. at the end of January, partaking in the 2007 protest and fleeing to Thailand after his monastery was raided by the police. After surviving imprisonment by the SPDC for9years and an assassination attempt by the government, U Pyinnyar Zawta made it to the U.S. after the Revolution.
U Pyinnyar Thiri mentioned that Buddhism places restrictions on monks, preventing them from engaging with citizens inapolitical manner. Yet he explained, if “the government or regime is not doing the right thing [like] not protecting the citizens, as the monks, they have to give the advice.”
The monks also discussed the role of the international community in the conflict, maintaining that the relationship between the military junta and the Chinese government prevents Burmese citizens from getting the help they need.
Kabita Parajuli, CC ’10 and organizer of the event, noted. “the Burmese military is able to stay in power through the Chinese government.”
The monks further addressed the outside world’s general lack of awareness of Burma’s harsh conditions. “They are not able to see the reality of how our people live in the country,” U Agga said.
“All the help during and after Saffron revolutions came through illegal [sources],” U Agga added. “They don’t allow anybody to have contact with people outside the country.”
When asked about the upcoming 2010 elections, U Pyinnyar Thiri said they would not change civic conditions, since the majority of government officials must come from the military or have some military experience.
The monks will likely face time in prison if they return to Burma. Yet the lack of internet and telephone lines make it difficult for them to reach their families at home.
U Gawsita told students not to take their American freedom for granted, saying, “All I want to request from all of you free students in the United States is to do everything to protect these human rights [you have].”
Saffron Revolution Flyer March 10
ကိုသာအမူ့ တော်ထမ်းစေလျှက်အိုသောသူနာသောသူများကိုသိဒ္ဓတ္ထမင်းသားမတွေ့ မမြင်ရစေရန်ရှောင်ရှားစေပါသည်။
သို့ သော်လည်းကံအကြောင်းတရားတို့ ၏စီမံရာကုသိုလ်၊အကုသိုလ်တရားတို့ ၏အကျိုးပေးသဘောကိုကားမည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်က
မျှတားဆီးပိတ်ပင်လို့ ရရိုးထုံးစဉ်မရှိသည့်အတွက်နတ်တို့ ဖန်ဆင်းအပ်သောနိမိတ်ကြီးလေးပါးကိုအကြောင်းခံကာတောထွက်ရဟန်းပြုဘုရားဖြစ်ခဲ့ရ
လုံးကိုတွေ့ ၍ဖွင့်ကြည့်ရာသေမှာကြောက်၍ပုန်းနေသူကိုတွေ့ သဖြင့်သေမင်းကထိုသူကိုသေရွာသို့ ပို့ ဆောင်ပေးလေသည်။ထို့ ကြောင့်ကံတရားတို့ 
မိမိတို့ ပြုလုပ်ပြီးသောကံတရားနှင့်ပြုလုပ်နေသောကံတို့ ၏အကျိုးပေးကသာအဓိကဖြစ်ပါသည်။မြန်မာ့စကားပုံတွင်လည်း"ကံစီမံရာ
ဤသို့ ဆိုပါလျှင်မိမိပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသောမကောင်းမူ့ အများစုကိုကောင်းမူ့ တစ်ခုပြုပြီးကျေပါစေလို့ ဆုတောင်းယုံလောက်
ခဲ့သော်လည်း" ဖခင်ကိုသတ်သော" ကံ၏အကျိုးကြောင့်အဝီစိငရဲကိုသွားခဲ့ရသည်သာ။
တော်မှာဘုရားတည်ပြီးတိုင်းပြည်ကိုကျွန်ပြုနေတာပါလို့ ပြောရင်သိပ်ရိုင်းတယ်လို့ ပြောကြမလား။
ယခုနှစ် ကောဇာသက္ကရာဇ်(၁၃၇၀)၊ခရစ်-၂၀၀၉ -ခုဟာမြန်မာ့သမိုင်းမှာမော်ကွန်းသစ်တွေရေးထိုးမဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်နေလို့ ပါဘဲ။
မြန်မာ့သမိုင်းကျွမ်းကျင်သူများနှင့်မြန်မာဗေဒင်ပညာရှင်များ၏အဆိုအရမြန်မာမင်းဆက်များဟာ " အ " မှာ စပြီး "သ" မှာဆုံးတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
ဟုတ်လည်းဟုတ်နေတာကိုတွေ့ ရမှာပါ။ အနော်ရထာစခဲ့တဲ့ပုဂံခေတ်ဟာ သီဟပတေ့မင်းလက်ထက်မှာဆုံးခဲ့ပြီး၊အလောင်းမင်းတရားစခဲ့တာကလည်း
မှာတူညီမူ့ တွေရှိနေတာကိုလည်းတွေ့ ရပါဦးမယ်။အကုန်လုံး" မင်း " ဆိုတဲ့ဘွဲ့ ကိုခံထားကြသူဖြစ်ပေမဲ့အစနှင့်အဆုံးကိုကြည့်ရင်အောင်ဆန်းဟာလည်း
"ဗိုလ်ချုပ်" ဖြစ်နေသလို သန်းရွှေကလည်း" ဗိုလ်ချုပ်"ပါဘဲ။နောက်ထပ်တူနေတာတွေကလည်းမင်းအားလုံးမှာဗေဒင်ပညာရှိတွေကိုမွေးမြူခဲ့ကြတာပါဘဲ။
၁၂၂၈ ခုနှစ်မှာသီပေါမင်းဟာဗေဒင်အခါတော်ပေးဦးပုညရဲ့တွက်ချက်မူ့ တွေ ကြောင့်(မြင်ကွန်းနှင့်မြင်းခုံတိုင်)တို့ ကိုသတ်ခဲ့တယ်
လို့ ဆိုကြပါတယ်။နအဖခေတ်မှာလည်းဗိုလ်ချုပ်၊တင်ဦး၊ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် အရေးတော်ပုံများဟာဗေဒင်အခါတော်ပေးတွေအရဆိုရင်ရောငြင်းလို့ ရနိုင်ပါ့
မလား။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဇာတာကိုယနေ့ ဇာတာဘဲဖြစ်ဖြစ်ရှေးအရင်ကဇာတာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲမူ့ မရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်တုန်းက
"ဗမာ"အခု"မြန်မာ''ဆိုတော့လဲနေ့ နံသဘောအရအတူတူသာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာ့ဇာတာကိုတည်ပြီးမင်းတို့ ၏ဇာတာနဲ့ နိူင်းယှဉ်ရတာအရမ်း
အားလုံးလက်လှမ်းမီသော သီပေါမင်းလက်ထက်ကနေဇာတာဖွဲ့ တွက်ကြည့်သော်သီပေါမင်း၏မွေးသက္ကရာဇ်မှာ(၁၂၂၀)ခုဖြစ်ပြီးထီး
သီပေါမင်းဇာတာနှင့်သူ ၏နန်းသက်ကိုနိုင်းယှဉ်သော်"စစ်"အင်္ဂါသည်ပုတိနှင့်မရဏတို့ တွင်ကျရောက်နေပြီးကြာသပတေးအုပ်စိုးပြီးတနင်္ဂနွေခိုက်နေ
သဖြင့် မိန်မတို့ ၏အုပ်စိုးချယ်လှယ်ပြီးလူကြီးများ၏လိမ်ညာလှဲ့ ပတ်မူ့ ကိုခံရမည်။ဆရာဆိုသူတို့ ၏မာယာပရိယာယ်တို့ ကြောင့်မိမိ၏အသက်အိုး
များထဲကိုစောက်ထိုးသာကျဆင်းပြီးနန်းပါပြုတ်ရလေသည်။ထို့ နောက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ဇာတာကိုပြန်ကြည့်သော် ဗိုလ်ချုပ်၏အထွက်အမြတ်
Posted by Sanghaalliance at 12:57 AM0comments
သိကြပါတယ်။ဘာကြောင့်ရတနာသုံးပါးကိုကိုးကွယ်ရတယ်ဆိုတာတော့တချို့ မသိဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓမြတ်ဘုရားဟာမကောင်းမူ့ မှန်သမျှကိုပယ်
ကြည်သောသူသည်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ပါ။ရတနာသုံးပါးသည်ဤလောက၌ကိလေသာအကုသိုလ်ဟူအမျှတို့ ကင်းရှင်းသဖြင့်ကိုးကွယ်ချဉ်းကပ်သူတို့ အား
လည်းကိလေသာကင်းစေပြီးကုသိုလ်ကိုသာဖြစ်စေ၍"လူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာ၊နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ"တို့ ကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်။နတ်၊ဗြဟ္မာ၊ဝိဇ္ဇာတို့ သည်ကား
ကိလေသာမကင်းကြသဖြင့်တိုသူတို့ အားမကိုးကွယ်အပ်။ကိလေသာမကင်းလျှင်လိုချင်တပ်မက်ခြင်း၊ကြောက်ရွံ့ ထိတ်လန့် ခြင်းတို့ ရှိကြသည်။ကိုယ်
ကိုယ်တိုင်ကမှလိုချင်တပ်မက်၊ထိတ်လန့် ကြောက်ရွံ့ နေလျှင်သူတပါးတို့ အားကြောက်ရွံ့ ထိတ်လန့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါမည်
"တော၊တောင်၊အာရာမ်၊အဓိကရသစ်ပင်၊နတ်ကွန်း၊တိရိ စ္ဆာန် တို့ အားကိုးကွယ်ခြင်းသည်ဘေးကင်းသောကိုးကွယ်ခြင်းမဟုတ်၊မြတ်
သောကိုးကွယ်ခြင်းမဟုတ်၊ထိုအရာတို့ အားကိုးကွယ်သဖြင့်ဆင်းရဲအပေါင်းမှမလွတ်မြောက်နိုင်" (ဓမ္မပဒ။ ဂါထာ-၁၈၉)
မည်၏။အလုံးစုံသောဆင်းရဲအပေါင်းမှလည်းလွတ်မြောက်နိုင်၏ ။" (ဓမ္မပဒ ။ဂါထာ-၁၉၂)
ဂုံကိုသံဃာတော်တို့ ထံတွင်ဆောက်တည်လျှင်ရသလို"ဘုရားရုပ်ပွားတော်၊ဆင်းတုတော်၊စေတီတော်တို့ "၏ရှေ့ တွင်လည်းရွတ်ဆိုအဓိဌာန်လျှင်ရနိုင်ပါ
တွင် မြတ်ဘုရားရဟန္တာတို့ ၏ဓါတ်တော်မွေတော်များဖြင့်ဌာပနာပြီးတည်ထားသောစေတီများကိုဓါတုစေတီဟုခေါ်ပါသည်။ပိဋကတ်သုံးနိကာယ်ငါးရပ်သော
ထို့ ကြောင့်ဤစေတီများသည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ အားမကောင်းမူ့ ကိုမပြုကြကုန်လင့်၊ကောင်းသောကုသိုလ်တရားတို့ ကိုသာပြုကြကုန်လော့
ဘုရားပုထိုးစေတီများကိုမြို့ များရွာများတွင်တည်ထားခဲ့ကြပြီးလူတို့ အားမကောင်းမူ့ ကိုတားမြစ်ပြီးကောင်းမူ့ ကိုတိုးပွားစေခဲ့ကြပါသည်။
ဘုရားပုထိုးစေတီပေါင်းများစွာတို့ ကိုတည်ထားခဲ့ကြပါသည်။ထိုသို့ ဘုရားတည်ထားကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးရဟန်းရောလူပါသာဓုခေါ်ခဲ့ကြပါသည်။
ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေကြသောစစ်အာဏာရှင်တို့ သည်လည်းမြို့ သစ်တွင်ဘုရားတည်ပြီးထီးတော်တင်ပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်ကြောင်း
မတ်လ(၈)ရက်နေ့ ထုတ်မြန်မာ့အလင်းနှင့်ကြေးမုံသတင်းစာတို့ တွင်ဖတ်လိုက်ရပါသည်။တို့ နိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာဘွဲ့ တပ်ထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဆိုတော့
"မြန်မာနိုင်ငံမှာရှေးဟောင်းစေတီပျက်ပေါင်းများစွာကိုယနေ့ ပြုပြင်မွမ်းမံနေကြပါသည်။ဘယ်ဘုရားဘယ်စေတီထဲကနေဘယ်တိရိ စ္ဆာန်ရုပ်တုကိုရရှိပါသလဲ
ဘယ်သူကြားဖူးကြပါသလဲ၊မြင်ဖူးတွေ့ ဖူးကြပါသလဲ၊"တွေ့ ဖူးမြင်ဖူးသူရှိကပြောကြပါဗျာ။
ကျွန်ုပ်တို့ ရဲ့မြတ်ဘုရားသည်မဟာဂရုဏာတော်ရှင်ဖြစ်သည့်အတွက်ဘယ်သတ္တဝါဘယ်တိရိ စ္ဆာန်ကိုသော်မှညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်းကို
မပြုပါ။ထို့ ကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာတွင်ဆင်ခံ၊မြင်းခံဘုရားဟူ၍မရှိပါ။ထို့ အပြင်ယနေ့ တည်နေသောဘုရားသည်နိုင်ငံကျက်သရေဆောင်ပြည်သူ့ အကျိုးဆောင်
ရဟန်းရှင်လူအားလုံးတို့ သည်ဆင်ဟူသောတိရိ စ္ဆာန်ကိုပူဇော်သလိုဖြစ်နေပါသဖြင့်ဘုန်းကံနိမ့်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။"
The Second Fault Line
Publish at Scribd or explore others: lines pick
Posted by Sanghaalliance at 12:35 AM0comments